31 Jan ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/omhv8c531 Jan Yeyintnge's Diary
BY YeYint Nge ... 1/31/20100comment
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မကျင်းပမီ ကပင် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း
နအဖ စစ်အစိုးရ ကျင်းပပေးမည်ဆိုသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မကျင်းပမီ ကပင် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း သုံးသပ်ထုတ်ပြန်ချက်
၁။ အမျိုးသားညီလာခံ ၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) နှင့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတို့ အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများ ကောင်စီ ၏ အမြင်သဘောထား
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီသည် န.အ.ဖ စစ်အစိုးရမှဦးစီးကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသားညီလာခံနှင့် ယင်းညီလာခံမှ ထွက်ပေါ် လာသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့်မူများ၌ ပါဝင် သည့် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီ ခြင်းမရှိသည့် အချက်များကိုလည်းကောင်း၊ န.အ.ဖ စစ်အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်း ပေးသည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးကော်မရှင် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခိုင်မာတောင့်တင်း၍ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည့် ဖွဲ့စည်းအုပ် ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ်ကို ရေးဆွဲပေးနိုင်မည့် ကော်မရှင်မဟုတ်ကြောင်း ကို လည်းကောင်း၊ ယင်းကော်မရှင် မှ ရေးဆွဲလိုက်သည့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေ (မူကြမ်း) တွင်ပါဝင် သည့် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသည့် ပုဒ်မ များ ကိုလည်းကောင်း၊ န.အ.ဖ စစ်အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်း ပေးသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင် သည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသောကြောင့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို လွတ်လပ်မျှတစွာ ကျင်းပပေးနိုင် မည် မဟုတ်ကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲသည် လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း မရှိသဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည်မဟုတ် ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အစဉ်တစိုက်လေ့လာဆန်းစစ်လျက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နအဖ စစ်အစိုးရ၏ သဘောထား
န.အ.ဖစစ်အစိုးရသည်၂၀၀၈ခုနှစ် မေလတွင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ မကျင်းပမီကပင် ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ လ (၉) ရက်နေ့၌ ကြေ ငြာချက်အမှတ် ၂/၂၀၀၈ ကိုထုတ်ပြန်၍ “ ၂၀၁၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ” အတိအလင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် န.အ.ဖ. ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် “၂၀၁၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်” ဖြစ်ကြောင်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊
အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ ညီလာခံ တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်း၏နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင်လည်းကောင်း၊ (၆၂) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သ၀ဏ်လွှာ တွင် လည်းကောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၃။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နအဖ ၀န်ကြီးချုပ်၏ ပြောကြားချက်
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ချာ့အမ်းမြို့ တွင်ကျင်းပသည့် (၁၅)ကြိမ် မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးညီ လာခံတွင် န.အ.ဖ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က “ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ” နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအလယ် တွင် အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ သည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ကျင်းပမည်ဆိုပါက မဖြစ် မနေလိုအပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေး ကော် မရှင်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ စသည့် ဥပဒေ များကို ယနေ့ထက်တိုင်အောင်ပြဌာန်း နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
၄။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ တရပ် ကျင်းပနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေအခြေခံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီ၏ ရေသောက်မြစ်တခုဖြစ်သကဲ့သို့ပင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအ ချက်တရပ်လည်းဖြစ်ကြောင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း အပိုဒ် (၂၁) အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင် တရားမျှတ သောရွေးကောက်ပွဲများမှတဆင့် လူတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ၌ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက် လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အပိုဒ် (၂၁) အပိုဒ်ခွဲ (၃) တွင် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒသည် အုပ်ချုပ် မှုအာဏာ၏ အခြေခံဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါဆန္ဒကို အချိန်ကာလပိုင်းခြား၍ တရားမျှတစွာ ကျင်းပသော ရွေးကောက် ပွဲများဖြင့်ထင်ရှားစေရမည်။
ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လည်း လူတိုင်းအညီအမျှ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမည့်အပြင် ထိုရွေးကောက်ပွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် ဖြင့်ဖြစ် စေ၊ အလားတူလွတ်လပ်သောမဲပေးစနစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ကျင်းပရ မည် ဟုဖေါ်ပြထားသည်။
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ကျင်းပနိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မရှင် ဥပဒေကိုပထမဦးစွာ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။သို့သော်န.အ.ဖစစ်အစိုးရအနေဖြင့်၁၉၈၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မရှင်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါတီစုံအထွေထွေရွေး ကောက် ပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်ကိုလည်း ယနေ့ထက်တိုင်အောင် ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါ။
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို ပြဌာန်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ သည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲတရပ် ကျင်း ပနိုင်ရေးအတွက် အရေး ကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့်အားလျှော်စွာ ယင်းဥပဒေကိုရေးဆွဲရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မရှင်အနေဖြင့် ပထမဦးစွာ ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ ယင်းဥပဒေမူကြမ်းကို နိုင်ငံ တော်သို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာ၍ ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ များ ၏ သဘောဆန္ဒ အကြံပြုချက်များကို တောင်းခံ ရယူခြင်း၊ ထိုသဘောဆန္ဒ အကြံပြုချက်များကို အတတ်နိုင်ဆုံးညှိနှိုင်းလျက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ကိုရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း စသည့်အဆင့်များကို ပြုလုပ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ နအဖ စစ်အစိုးရ နှင့် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုများ
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
၀န်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် အဂတ်ိလိုက်စားမဲဆွယ် စည်းရုံးနေမှုများကို ကြေငြာချက် ထုတ် ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် န.အ.ဖ အုပ် ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အနေဖြင့် အစိုးရ (အငြိမ်းစား) ၀န်ထမ်း များစာရင်း ကို ကြိုတင်ကောက်ခံလျက်ရှိခြင်း၊ မဲဆန္ဒ ရှင်များစာရင်းကို ကြိုတင်ကောက်ခံလျက်ရှိခြင်း၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းတချို့ ကို ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ၀င်ရောက်အရွေးချယ်ခံနိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင် ဆင်မှုများပြုလုပ်နေခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းသည် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ် သဖွယ် မဲဆွယ်စည်းရုံးနေမှုများ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးနေမှုများ၊ စသည် တို့အပြင် န.အ.ဖ ၏ လုပ်ရပ်များကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသည့် တခြားသော နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၏ မဲဆွယ် စည်း ရုံးနေ မှုများ၊ စသည်တို့ကို စစ်အစိုးရအနေဖြင့် မသိကျိုးကျွံပြု ခွင့်ပြုလျက်ရှိသည်။
၆။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးပါတီများ ၏ အခြေအနေ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ တိုင်း/ပြည်နယ် ရုံးခန်းများ နှင့် မြို့နယ်ရုံးခန်း များကို အကြောင်းပြချက်မရှိ ချိတ်ပိတ်ထားခြင်းမှ ယနေ့ထက်တိုင် အောင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပေးသေး ခြင်း၊ ပါတီဝင်အသီးသီးအပေါ် အာဏာပိုင်တို့မှ နှောင့်ယှက် ဟန့်တား ဖမ်း ဆီးနှိပ်စက် အကျဉ်းချထားခြင်းများကို ယနေ့ ထက်တိုင်အောင်ပြုလုပ်ကျူးလွန်လျက်ရှိခြင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ် ရွေး ကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများကို ဖျက် သိမ်းထားသဖြင့် ယနေ့ထက်တိုင်အောင်စည်းရုံး လှုပ် ရှားခွင့် မရရှိခြင်း၊ စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
၇။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲတရပ်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ရှိရမည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲတရပ်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ရှိရန် မဖြစ် မနေလိုအပ်ပါသည်။ န.၀.တနှင့် န.အ.ဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိကြောင်း ကိုအောက်ပါ အကြောင်းအချင်းရာ များက ပြဆိုလျက်ရှိသည်။
(က)ယနေ့ထက်တိုင်အောင်၊ဦးတင်ဦး၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အားအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်များ၊(၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ရဟန်းသံဃာ များအပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော်၊မြန်မာနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် များ ချမှတ်ခံထားရခြင်း၊
(ခ) ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေး အထွေထွေအကြပ်အတည်းကို အကြောင်းပြု၍ ၂၀၀၇ စက်တင် ဘာလတွင် ရဟန်းရှင်လူ၊ လုပ်သားပြည်သူ သိန်းနှင့်ချီ၍ ချီတက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းနှင့် န.အ.ဖ စစ် အစိုးရမှ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် နှိမ်နင်းခဲ့ခြင်း၊
(ဂ) အောက်ခြေတပ်မတော်သားများအတွင်း စားဝတ်နေရေးပြည့်စုံခြင်းမရှိသဖြင့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှု များ၊ နောက်ဆက်တွဲ
ခမရ (၈၀) နှင့် ထောက်လှမ်းရေးတပ် ခမရ (၅) တို့၏ ပစ်ခတ်မှုများ
(ဃ) ဒုတ်ိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးလုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ဗိုလ်မှူးဟောင်းဝင်းနိုင်ကျော်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ၀န်ထမ်းဦးသူရကျော်
တို့သည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြား သည်ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် သေဒဏ် ချမှတ်ခံရမှုများ
(င) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ယနေ့ထက်တိုင်အောင်မြင်သာထင်ရှားသော ငြိမ်းချမ်း ရေး ရယူနိုင်မှု မရှိသေး သည့်အခြေအနေများ
(စ) တနေ့တခြား ဆိုးရွားလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဘ၀ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေများ
(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသည့်အခြေအနေများ
၈။ ဖျက်သိမ်းရမည့် ဥပဒေများ
ရွေးကောက်ပွဲတရပ်မကျင်းပခင် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက် ညီခြင်းမရှိသည့် အောက်ပါဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းရမည်ဖြစ်သည်။
(က) ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ
(ခ) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၆/၈၈
“ အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ”
(ဂ) ၁၉၇၅ ခုနှစ် “ နိုင်ငံတော်အားနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သည့်ဥပဒေ ”
(ဃ) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် - ၅/၉၆
“ နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးရေးနှင့် အမျိုးသားညီ လာခံ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်
စွာဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို နှောင့်ယှက်ဆန့်ကျင်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ”
(စ)၁၉၀၈ ခုနှစ် မတရားသင်း မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများအတွဲ - ၂ မတရားသင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များ
(ဆ)၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ
(ဇ) ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေနှင့် ယင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
(ဈ) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် န.၀.တ ဥပဒေအမှတ် ၂၀၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊
(ည) ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ န.၀.တ ဥပဒေအမှတ် ၈ ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ဥပဒေ
(ဋ) ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ န.၀.တ ဥပဒေအမှတ် ၉၊ ရုပ်ရှင်ဥပဒေ
(ဌ) ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ န.၀.တ ဥပဒေအမှတ် ၁၀ ၊ ကွန်ပျူတာပညာဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ
(ဍ) ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း)
စသည့် ဥပဒေများသည် ဖျက်သိမ်းရမည့်ဥပဒေများဖြစ်သည်။
၉။ မြန်မာနိုင်တွင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် မဲပေးစနစ်
ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးသည်ဆိုခြင်းမှာ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းတွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားကြ
သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အချင်းကိုသေသေချာချာလေ့လာစိစစ်လျက် တိုင်းပြည်၏ အကျိုးစီးပွားတစုံတရာကို ထမ်းဆောင်နိုင်မည့်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မဲမပေးလျှင်မနေရ၊ မဖြစ်မနေ မဲပေးရမည်ဆိုသည့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်မျိုးမရှိပါ။ မဲဆန္ဒ ရှင်များအနေဖြင့် မိမိသဘော
ဆန္ဒအရသာ မဲပေးလိုကပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်၏ အဓိက ကျောရိုးမှာ “ လွတ်လပ်မှု နှင့် တရားမျှတမှု ” ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် န.အ.ဖ စစ်အစိုးရ၏ အထက်
ဖေါ်ပြပါလုပ်ရပ်များကို နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ပါက -
၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းသည် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရန်လုံ
လောက်သော အချိန်ကာလ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယနေ့ထိ တိုင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင် ဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ဥပဒေတို့ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း မရှိပါ။
-အထက်ဖေါ်ပြပါ ဥပဒေများကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းမရှိသေးမီ အချိန်ကတည်းက ပင် န.အ.ဖ စစ်အစိုးရ နှင့် လက်ဝေခံများက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လက်ဦးမှုရယူကာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု များပြုလုပ်လျက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေကြခြင်း၊
- စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတရပ် ထူထောင်နိုင်ရေးကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေကြသည့် ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြသော အနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်း သားနိုင်ငံရေးပါတီများကိုမူ ယနေ့ထက် တိုင်အောင် အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်လျက်ရှိခြင်း၊ထို့ပြင် န.အ.ဖ စစ်အစိုးရက ကျင်းပမည့်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ် များသည် ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ သက်ဝင်လှုပ်ရှားရမည့် လွှတ်တော်များသို့ တက်ရောက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူ့အကျိုးကို ထမ်းဆောင်ကြရမည်ဆိုခြင်း ထက် စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်တည်တံ့ရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အကြောင်းအချက်များအရ န.အ.ဖ စစ်အစိုးရ ကျင်းပပေးမည်ဆိုသည့် ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲသည် မကျင်းပမီ ကပင်“ လွတ်လပ်မှု၊တရားမျှတမှု” မရှိကြောင်းနှင့် အားလုံးလွှမ်းခြုံပါဝင်နိုင်မည့်ရွေး ကောက်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် န.အ.ဖ ၏ မည်သည့်ကိုယ်စား လှယ် ကိုမှ မဲမပေးခြင်း၊ မဲရုံများသို့သွားရောက်မဲမထည့်ခြင်းအားဖြင့် လူထုပါဝင်ပတ်သတ်မှု မရှိသောမတရားသည့်ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ထင်ရှားစေခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြပါရန် နှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ လည်း အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ အသိ အမှတ်မပြုသင့်ပါကြောင်း တို့ကို အလေးအနက်ပန်ကြားလျက် သုံးသပ်ချက် ထုတ် ပြန် အပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါလျှင် - ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ရေးဌာန
တာဝန်ခံ၊ ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ရေးဌာန၊ ဖုန်း - ၀၈၆၂၁၆၀၁၀၈
 ခေတ်ပြိုင်၊ ၅ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၀
 31.3.2009 BLC Statement
 19.1.2009 RFA , 25.9.2009 ဧရာဝတီ
 AAPPB MONTHLY CHRONOLOGY DECEMBER 2009
 24.12.2009 BLC Statement
 January 12, 2010 BBC Burmese News
 ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၁) ရက်နေ့ ၊ ဦးစိန်လွင် နှင့် မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အင်တာဗျူး
BY YeYint Nge ... 1/31/2010 1 comment
ရိုဟင်ဂျာရေးရာ လူမှူစီးပွားသတင်းဂျာနယ် Volume 1 of Issue2(February 2010)
ဂျပန် နိုင်ငံ ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသားများ မှ ထုတ်ဝေသည် ရိုဟင်ဂျာရေးရာ လူမှူစီးပွားသတင်းဂျာနယ် Volume 1 of Issue2(February 2010)
Letter to all and Weekly Political Events Regarding the SPDC's Election
http://ifile.it/6mow8eu Letter to All
Weekly Political Events Regarding the SPDC's Election
Voice of Burma သတင်းစဉ်အမှတ် - ၇၄၇
http://ifile.it/joc4dhwOice of Burma
မင်းဘူး-ပွင့်ဖြူ-ဆင်ဖြူကျွန်း ကားလမ်းဘေးတစ်နေရာက ရှောက်တောမြို.လေးရဲ. အ၀င်မှာ အေးချစ်မြိုင်ကားပေါ်က ကျွန်တော် ဆင်းခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မှ လိုက်ပါလာသည့် အဝေးပြေးကားပေါ်မှ ဆင်းဆင်းချင်း အညာရနံ.ကို ရှုရှိုက်ခွင့်ရသည်။ ဆယ့်ငါးနှစ်ကျော် ခွဲခွာခဲ့ရသည့် အညာမြေသည် ရုတ်တရက် ပြန်ရောက်လာသည့် အခါတွင်လဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုနေဆဲလို. ခံစားရပါသည်။
ထိုအချိန်မှာ ရောင်နီမလာသေးပါ။ ဒီဇင်ဘာနှင်းက ပိတ်နေတာမို. အနားက အကြော်ဆိုင်မှာ မီးလှုံပြီးမှ ခရီးဆက်ဖို. စဉ်းစားလိုက်ပါသည်။ ရွာဖက်ကိုသွားမည့် လူတစ်ယောက်နှင့် အကြော်ဆိုင်တွင် စကားစပ်မိပြီး လှည်းကြုံလိုက်ဖို. အဆင်ပြေသွားသည်။ မဟုတ်လျှင် ရှောက်တောမှ ကျွန်တော်သွားမည့် ဇီးတောရွာကလေးကို ရောက်ရန် ဆည်ရေလွှတ်သည့် မြောင်းဘောင်တစ်လျှောက် တစ်နာရီလောက် လမ်းလျှောက်ရမှာဖြစ်သည်။
ဖုန်တလိပ်လိပ်နဲ. လှည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ယာတောဆင်းလာတဲ့ လယ်သူမတွေနဲ.တွေ.ရပါသည်။ နေ.လည်စာထည့်သည့် ဒန်ချိုင့်ကိုယ်စီနှင့် ဖြစ်သည်။ ပဲသိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် တံစဉ်ကိုင်လာသူတွေက ပဲစင်းငုံချိတ်ဖို. သွားကြတာဖြစ်မည်။ သို.မဟုတ် နေကြာချိတ် သွားသူများလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တချို.နေကြာခင်းတွေ မသိမ်းရသေးတာကို အ၀ါရောင်ပန်းခင်းကြီးအဖြစ် လှည်းပေါ်မှမြင်နေရသည်။ တူရွင်းငယ်ကိုယ်စီ ကိုင်လာကြသူများကတော့ သေချာသည်။ မုန်းချောင်းနံဘေးက မြေနုကျွန်းတွေဆီကို ကြက်သွန်ဖော်ဖို. သွားကြလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့် လယ်စိုက်ချိန်မှစပြီး အလုပ်သမားခတွေ ဈေးတက်သည်ဟု လှည်းမောင်းလာသူက လယ်သူမများကို ကြည့်ရင်း ရှင်းပြပါသည်။ တစ်နေ.အတွက် နေ.စားခ ရှစ်ရာကျပ်မှ နှစ်ရာတိုးပြီး တစ်ထောင်ဖြစ်သွားခြင်းဟု သိရသည်။ လုပ်အားခများ ၂၅% တိုးသည် ဟုပြောနိုင်မည်ထင်သည်။ သို.သော် စာလေးမတောက်တခေါက်ဖတ်ပြီး Poverty Line တို. Human Development Index တို.လို စကားလုံးတွေကို ကြားဖူးနားဝရှိနေသော ကျွန်တော့်အဖို. သူတို.၏လက်ရှိဝင်ငွေအပေါ် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်သွားရပါသည်။
အဆင်ပြေကြရဲ.လားဟု ကျွန်တော်ကမေးသောအခါ ဒီလိုပါပဲဟု လှည်းဆရာက ဖြေသည်။ သို.သော် လမ်းတလျှောက်မြင်နေရသည့် အလုပ်သမများ၏ ဒန်ချိုင့်အားလုံးတွင် လက်ဖက်အကြမ်းနည်းနည်း၊ ပဲခြမ်းကြော်နည်းနည်းကို ဆီပါရုံဆမ်းပြီး မာဆတ်ဆတ်ထမင်းကြမ်း တစ်ခဲနှင့်ရောကာ နေ.လည်စာအဖြစ် ထည့်လာမည်ကို ကျွန်တော်အတတ်သိနေသည်။ သူတို.ကိုယ်တိုင်က သူတို.ဘ၀ကို စိတ်ညစ်ရကောင်းမှန်း မသိသောအခါ မွန်းကြပ်လာသည့် ကျွန်တော့်မှာ သက်ပြင်းကိုသာ ချလိုက်မိပါသည်။
ရင်းနှီးခဲ့ဖူးသည့် အသံတစ်ချို.ကို ရွာမရောက်ခင် လယ်ပြင်စပ်မှာ စကြားရသည်။ ကျွန်တော့်အရီးလေး မတင်အေးအသံလဲပါသည်။ ကျွန်တော့်ထက် အသက်နှစ်နှစ်သာကြီးသည့် အရီးလေးက ရွာမှာ ကာလသမီးခေါင်းဖြစ်နေပြီ။ လယ်များများပိုင်သူတွေက စိုက်ချိန်၊ သိမ်းချိန်ဆိုလျှင် သူမနှင့်ညှိရနှိုင်းရသည်။ ဘယ်သူ.လယ်ဘယ်နေ.စိုက်မည်။ ဘယ်သူ.စိုက်ခင်းကို ဘယ်သူတွေလုပ်မည် စသဖြင့် သူမကစီမံနိုင်သည်။ ကုန်းဇောင်းရွာ၏ အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဟု ကျွန်တော်တခါတရံ နောက်သောအခါ မူလတန်းသာ အောင်ခဲ့သော ကျွန်တော့် အရီးလေးခမျာ နားမလည်သဖြင့် မရယ်နိုင်ရှာပါ။
တစ်ရွာလုံး ဆွေမျိုးမကင်းကြသူများဖြစ်ရာ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းက အားလုံးက ၀ိုင်းချစ်ကြပါသည်။ ယခုလည်း ကျွန်တော့်ကိုမြင်မြင်ချင်း သူတို.အားလုံး ပြေးလာကြသည်။ ၀မ်းသာအားရနှင့် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် နှုတ်ဆက်သံများ ဆူညံသွားသည်။ မလေးကဘာလို.မပါတာလဲ၊ ဘကြီးကောမလိုက်လာဘူးလား၊ အရီးလေးဘယ်တော့လာမလဲ စသည့် သူတို.၏မေးခွန်းများကို ဖြေအပြီး အိတ်တွေကို ၀ိုင်းသယ်ဖို. သူတို.ရွာထဲကို ပြန်ဝင်ကြသည်။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် လာစဉ်က ခြောက်တန်းကျောင်းသား ကျွန်တော့်ကို မကြီးမငယ်နှင့် ချီပိုးပြီး လာကြိုခဲ့ကြတာကို ပြန်အမှတ်ရမိပါသည်။
ယခုတော့ ချီလို.ပိုးလို.ရသည့်အရွယ်ကို လွန်ခဲ့ပြီ။ ဆယ့်ငါးနှစ်ဆိုသည့် အချိန်သည် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ကောင်းကောင်း ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်သည့် ကာလ အတိုင်းအတာ ဖြစ်သည်။
သို.သော် ကျွန်တော်ချစ်သောရွာကလေးကမူ ဘာမှထူးခြားစွာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေး။ လွန်ခဲ့သော ဆယ့်ငါးနှစ်ကအတိုင်း ရှိနေပါသေးသည်။
ရွာအ၀င်မှ မူလတန်းကျောင်းကလေး၏ နံရံများသည် ယခင်ကအတိုင်း ပေါက်ပြဲလျှက်ရှိသည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ဝပ်ပြီး စာလိုက်ရေးနေသော ကျောင်းသားများကို နံရံအပေါက်အပြဲများမှ မြင်နေရသည်။ စာသင်ခုံမလောက်ငသဖြင့် ကျောင်းသားအရေအတွက်၏ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ ခုံဖြင့်ထိုင်ခွင့်မရကြောင်း မနှစ်ကလေးတန်းအောင်သော်လည်း စီးပွားရေးမပြေလည်သဖြင့် ယခုနှစ်ကျောင်းထွက်လိုက်သည့် အတူပါလာသူ တူမငယ်ကပြောပြသည်။ သွပ်မိုးများပေါက်ပြဲနေပြီး အပေါက်များမှတဆင့် ကျောင်းသားများပေါ်သို.နေရောင်များ ထိုးကျနေသည်ကိုလည်း မြင်နေရပါသည်။
ကျောင်းဝင်းထဲရောက်နေသော ဆိတ်အုပ်ထဲမှ ဆိတ်ဖားကြီးတစ်ကောင်ကို တစ်လှည့်စီခွစီးနေသော ကျောင်းသားများကိုလည်း မြင်နေရသည်။ ကျောင်းသားနှင့် ဆရာအင်အား မမျှတသဖြင့် ဆရာ၊ဆရာမများလည်း ကျောင်းသားများကို မထိန်းအား။ စာသင်သည့် အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပင် တစ်ခန်းဝင် တစ်ခန်းထွက်ဖြင့် မနည်းလုံ.လထုတ်နေရသည်။ ကျောက်သင်ပုန်းကို တဖုန်းဖုန်းရိုက်သံများ ဆူညံနေသည်။
အချို.ကျောင်းသားများက လေးခွတစ်လက်ဖြင့် သစ်ပင်ပေါ်သို. ပစ်ခတ်နေကြသည်။ ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ရှဉ့်တစ်ကောင်ဖြစ်စေ အပျင်းပြေ ပစ်နေကြခြင်းဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်တို. ညီအကိုတစ်သိုက်လည်း ငယ်စဉ်က လေးခွပစ်ခဲ့ဖူးကြပါသည်။ လူကြီးများဆူသည့်ကြားမှ သရက်သီး၊ စာကလေး၊ ရှည့် တွေ.တွေ.သမျှကို ကျွန်တော်တို. လက်တည့်စမ်းခဲ့ကြသည်။
အမှန်တော့ လေးခွသည် ဆော့စရာ ရှားပါးလှသော ကျေးလက်မှ ကလေးငယ်များအတွက် ကစားစရာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို.ပေါ်က ကလေးအများစု တီဗီဂိမ်းတွေ၊ ကွန်ပြူတာဂိမ်းတွေနှင့် ယဉ်ပါးနေချိန်မှာ သူတို.ကနွားကျောင်းနေရပါသည်။ နွားစာစဉ်းနေရသည်။ ကောင်တာစတွိုက်ဆိုတာ သူတို.ဘာမှန်းမသိကြ။ ပါဝါရိန်းဂျားနှင့် ဟယ်ရီပေါ်တာဆိုလျှင် ပိုလို.တောင်ဝေးဦးမည်။ ဟက်ပီးဝေါမှာ တိုက်ကားစီးတဲ့အကြောင်းပြောပြလျှင် သူတို.လေးတွေဥာဏ်ပြေးလွန်းမှ ထွေလာဂျီချင်း တိုက်ကြတာလောက်ကို မြင်ယောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီအတွေးတွေက အဝေးကြီးမှ လာခဲ့ရသူ ကျွန်တော်၏ ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်သလို ရှိသည်။
ဆော့နေရင်းမှ လမ်းမပေါ်ရောက်လာသော ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်နှင့် ဆုံမိပါသည်။ အသက်က ၁၀ နှစ်ခန်.တော့ရှိမည်ထင်ပါသည်။ စကားပြောကြည့်မိသည်။ ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲဟု မေးသောအခါ ဆရာပြောင်လုပ်မယ်ဟု ပြောသဖြင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၏ ငယ်ဘ၀ကိုသတိရပြီး ပြုံးမိပါသည်။ ထိုကလေးငယ်ပြောသည့် ဆရာပြောင်သည် ဆရာဝန်မဟုတ်သည့် ဆရာဝန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို. ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး သူ.ကိုသာအားကိုးရသည်။ ရွာနီးချုပ်စပ်တွင် ဆေးထိုးအပ်ရှိသူမှာလည်း သူတစ်ဦးတည်းဖြစ်သည်။ သူ၏ထင်ရှားလှသော မဟာနဖူးကြောင့် သူ.ကိုဆရာပြောင်ဟု အားလုံးက ကင်ပွန်းတပ်ထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို.ငယ်ငယ်က ကလေးများအားပြောမရလျှင် ဆရာပြောင်လာပြီဟု ပြောလိုက်ပါက ချက်ချင်းလိုလို ငြိမ်သွားကြသည်။ ကလေးအားလုံးက သူ.ဆေးထိုးအပ်ကို ဒေဝေါထက်ကြောက်သည်။ ဆရာပြောင်သည် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျောင်းတက်ရင်း ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့ရာ နောက်ပိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးမှုး သင်တန်းတက်ပြီး ရွာတွင် ဆေးမှုးဖြစ်လာသည် ဟုသိရသည်။
ဆရာပြောင်၏ ကုသမှုသက်တမ်း တစ်လျှောက်တွင် ဖိတ်စဉ်ခဲ့သည်များရှိသလို ပျောက်ကင်းခဲ့သည်များလည်းရှိသည်။ မည်သို.ပင်ဆိုစေ ဆရာဝန်မရှိသောအရပ်၌ ဆေးပုလင်းပေါ်မှ စာများကိုဖတ်တတ်သူမှာ သူတစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည်ဖြစ်ရာ ရပ်ရွာမှအလေးထား နေရာပေးမှုကို ရရှိသူဖြစ်ပါသည်။ အနှီကလေးငယ်သည် ဆရာဝန်ကိုမမြင်ဖူးသူဖြစ်ရာ ဆရာဝန်များကို အထင်လည်းမကြီးတတ်၊ အားကျရကောင်းမှန်းလဲ မသိပေ။ သူ.ဘ၀တွင် သူရဲကောင်းအဖြစ် အားကျနေရာပေးခံရသူမှာ ဆရာပြောင်သာ ဖြစ်တော့သည်။
ထို.ကြောင့် ကြီးလာရင် ဆရာပြောင်လုပ်မယ်ဟု ပြောသောကလေးငယ်၏ မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်ကို ကြားရသောအခါ ကျွန်တော်ရုတ်တရက် ၀မ်းသာသွားပါသည်။ ဘ၀အတွက် ရည်မှန်းချက်ရှိသော ကလေးတစ်ဦးကို မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ.ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို.သော် ကြာကြာဝမ်းမသာနိုင်ပါ။ ဒီလိုနေရာမျိုးတွင် ဒီလိုအခြေအနေဖြင့် ဆေးမှုးဖြစ်ချင်သူ ကျောင်းသားလေးမှာ ကျန်းမာရေးမှုးသင်တန်း တက်ရဖို.ဝေးစွ၊ ဆယ်တန်းအောင်ရန်ပင် မလွယ်နိုင်သည်ကို စိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေရာ ရင်ထဲမှာလေးသွားရပါသည်။ ထိုကလေးကို အားပေးချင်ပါသည်။ သို.သော် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် အားမရှိသလိုဖြစ်နေသဖြင့် ကျန်းမာရေးမှုးဖြစ်ချင်သော ကျောင်းသားလေး၏ ချေးအထပ်ထပ်ဝင်နေသာ လက်ကလေးများကိုကိုင်ရင်း နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်လာခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်တော့်အဘွားအိမ် ရောက်ရောက်ခြင်း အိပ်ယာပေါ်မှာ နားနေသည့် ကျွန်တော့်ဦးလေးဖြစ်သူကို တွေ.ရပါသည်။ ဦးလေးက တစ်ရွာလုံးမှာ ပထမဦးဆုံးဘွဲ.ရသူဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလည်း အတော်ပြေလည်သည်။ လွန်ခဲ့သည် နှစ်ရက်က ငရုတ်ခင်းကို ဆေးဖြန်းရင်း မြွေအကိုက်ခံရရာ တစ်ရွာလုံးတွင် တစ်စင်းတည်းရှိသော သူတို.အိမ်မှ ထွေလာဂျီဖြင့် လေးမိုင်အကွာမှ ပွင့်ဖြူတိုက်နယ်ဆေးရုံသို. သွားခဲ့ရသည်။ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးကို ကျပ်ငါးသောင်းပေးပြီး ထိုးခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဆေးရုံတွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးရှိနေသဖြင့် ကျွန်တော်ရောက်သောနေ.သည် သူအသုဘချသောနေ.မဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြီး သူကရယ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့မရယ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ.လိုကံမကောင်းသော လူပေါင်းများစွာ ရှိနေကြောင်း ကျွန်တော်သိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှ အရွယ်ကောင်းသော လယ်ယာလုပ်သား ရာပေါင်းများစွာသည် နှစ်စဉ် မြွေကိုက်ခံရပြီး မရဏမင်း၏ သားကောင်အဖြစ် ရောက်နေကြရသည်။ ကျွန်တော်တို. ရွာကလေးတွင်ပင် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ဦး မြွေကိုက်ခံရပြီး အသက်ဆုံး နေရသည်။
ထိုသို.သော အခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ.နေရသောဒေသမှ ဆေးရုံတွင် အဘယ်ကြောင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အဆင်သင့် မရှိရပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့် အချိန်မရွေး ကုသမှု မပေးနိုင်ရပါသနည်း။ တစ်နေ.လုပ်အားခ တစ်ထောင်ကျပ်ဖြင့် ရပ်တည်နေရသူများအတွက် အသက်ဆက်နိုင်မည့် ဆေးတစ်လုံးသည် အဘယ့်ကြောင့် ငါးသောင်းကျပ်ဖြစ်နေရပါသနည်း။ ဆရာဝန်များအစား ဆရာပြောင်များကို အဘယ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို. အားကိုးနေရပါသနည်း။ လူပေါင်းများစွာကို မြေကြီးအောက်သို. နှစ်စဉ်ပို.နေသည်မှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်မှ မြွေဆိုးများလား၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလား၊ အခြားတစ်ခုလား စသည့် လားပေါင်းများစွာ၊ အဘယ့်ကြောင့်ပေါင်းများစွာကိုတွေးရင်း သက်မတစ်ခုချလိုက်မိပါသည်။
သူငယ်ချင်းဇော်လွင်၏ အသံဖြစ်သည်။ သူနှင့်ကျွန်တော်က တစ်နေ.တည်း မွေးခဲ့ကြပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက စားအတူ၊ ဆော့အတူဖြစ်ရာ ညီအကိုတွေထက် ရင်းနှီးသည်။ သူလာသည်ကိုသိသဖြင့် ကျွန်တော် ထွက်တွေ.သောအခါ သူ၏ သုံးနှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေးကိုပါ တွေ.လိုက်ရသည်။ မတွေ.ရတာ ဆယ့်ငါးနှစ်ကြာပေမယ့် ကျွန်တော်တို.ဆက်ဆံရေးက နှစ်ဦးစလုံးကို နွေးထွေးစေမြဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က တစ်ခါမှ မတွေ.ဖူးသေးသည့် သူ.အမျိုးသမီးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရန်ပြောတော့ သူကအိမ်လိုက်ခဲ့ရန် ခေါ်သဖြင့် ကျွန်တော်လိုက်သွားရသည်။
လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် တွေ.သမျှလူကို ရယ်ပြရ၊ လာနှုတ်ဆက်သမျှလူကို ပြန်နှုတ်ဆက်ရဖြင့် ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်မှ သူနှင့်စကားပြောရသည်။ သူတို.မိသားစုလေးက ပျော်စရာလေး ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးအရ ကသီလင်တမဖြစ်ဘဲ အလျှင်မီသည့် အခြေအနေကို တွေ.ရသဖြင့် ၀မ်းသာရပါသည်။
"ဟကောင်ရ၊ သူတို.က ခုဒီဟာစိုက်ခိုင်း၊ ခုဟိုဟာစိုက်ခိုင်းနဲ. ၀မ်းစာရတာတောင် မင့်ကောင်တော်လို.မောင်ရင်ရ။ ရွာထဲမယ် သူများတွေဆို စပါးပေးတွေ၊ ပဲပေးတွေ ယူပြီး ကြွေးထဲနစ်နေပြီဟ။"
လွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးခွင့်မရှိသည် စီမံကိန်းလယ်ယာမြေစံနစ်၏ ဒုက္ခသုက္ခများကို သူငယ်ချင်းက သူနားလည်သော စကားလုံးများဖြင့် ရင်ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များထဲသို. တစ်ကြိမ်မှ မရောက်ဖူးသူများ၊ ဒေသ၏ ရေမြေရာသီဥတုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးစံနစ်များကို နားမလည်သူများက အဝေးမှအမိန်.အာဏာများ ချမှတ်ကာ တစုံတရာ လုပ်ဆောင်ခိုင်းသောအခါ သူတို.မှာ လိုက်နာရန် အခက်ကြုံကြရပါသည်။ သို.သော် ငြင်းဆန်ရန်မှာ ပိုလို.ပင် ခက်ခဲနေသေးသည်ဖြစ်ရာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဇွတ်နှစ်ပြီးသာ လုပ်နေရကြောင်း သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြပါသည်။
"ပညာရှင်တွေချထားတဲ့ စီမံကိန်းလို.ပြောပြီး ငါတို.ကိုခိုင်းတာပဲ ငါ့ကောင်ရာ။ ခုတော့ နွေလယ်ပြေးလုပ်မိမှ ရွှေထည်လေးပြုတ်ရတယ် လို.တောင် ပြောနေကြပြီ။ ဟား ဟား။"
သူ.စကားသူသဘောကျပြီး ရယ်နေသော ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကို နားပေါက်ဟောင်းလောင်းနှင့် သူ.ဇနီးဖြစ်သူက ပြုံးနေရင်းက မျက်စောင်းထိုးပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ နွေစပါး၊မိုးစပါး၊ နှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစား စသော စီမံကိန်းများ၏ ထုထောင်းမှုများကြားတွင် ရယ်မောပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်သော သူငယ်ချင်းမိသားစုကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ကာ ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို. ဇီးတောရွာကလေးသည် ပွင့်ဖြူမြို.နယ်ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော မုန်းချောင်း၏ မြောက်ဖက်ကမ်းနဖူးပေါ်တွင် တည်ရှိသော ရွာငယ်ကလေးဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို.ငယ်စဉ်က ရေဒီယိုမှ မကြာခဏ ကြားရသော ရေနံ.သာဝင်းမောင်၏ "မုန်းချောင်းကိုကျော်တဲ့အခါ ရောက်ပါတော့မယ် ကျမတို.ကုန်းဇောင်းရွာ" ဟူသော သီချင်းစာသားထဲတွင်ပါသည့် ကုန်းဇောင်းရွာနှင့် ကပ်လျှက်ဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော် ကျောင်းတော်ရာ ဘုရားကြီး၏ တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ရှိသည်။ ရွေစက်တော်ဘုရားတည်ရှိရာ ငဖဲတောင်စဉ်တန်းကို မှုန်ပြပြဖြင့်မြင်နေရပြီး ရေမြေရာသီကောင်းသည့် အပူပိုင်းမှ အိုအေစစ်ဒေသလေးဖြစ်သည်။
အားလုံးနီးပါးတောင်သူများ ဖြစ်ကြပြီး အညာသားဖြစ်ရသည်ကို ဂုဏ်ယူစိတ်အပြည့်ရှိသည့် ဒေသဖြစ်သည်။ ရိုးသားအေးဆေးပြီး ဖော်ရွေသူများဖြစ်သည်။ တစ်ရွာလုံးက ကျွန်တော့်ကို ချစ်ကြသည်ဖြစ်ရာ ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်သွားသွား အားလုံးက အပြုံးဖြင့် ကြိုကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သို.သော် အချို.အပြုံးများ ညှိုးနွမ်းနေသည်ကို တွေ.ရသောအခါ ကျွန်တော်ဝမ်းမသာနိုင်ဖြစ်ရပါသည်။ ယခင်က ဤရွာကလေးမှ လယ်ယာမြေများသည် သူတို.ကို လောက်ငရုံမက ပိုလျှံသည်အထိ ကျွေးမွေးထားနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်မူ သူတို.ထဲမှအများစုမှာ လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာသယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်ခွင့် မရှိသော စီမံကိန်း စိုက်ပျိုးရေးစံနစ်၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြင့် နပန်းလုံးနေရသည်။
ယခုနှစ်ဆိုလျှင် ခါတိုင်းထက်ပင် ပိုမိုဒုက္ခရောက်ဦးမည့်ပုံရှိသည်။ အခါမဲ့မိုးနှင့် စံချိန်တင် ရေကြီးမှုများကြောင့် ပဲစိုက်ခင်းများ မအောင်မမြင် ဖြစ်နေချိန်တွင် စပါးကိုသုံးသီးစားစံနစ်ဖြင့် တက်သုတ်ရိုက် စိုက်ပျိုးရသောကြောင့် ပေါင်းမြက်များ ထူထပ်ကာ အထွက်နှုန်းကျဆင်းမည့် အလားအလာများမြင်နေရသည်။ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အခြားဆေးများ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူမရနိုင်သောကြောင့် ညှိုးချုံးခြောက်ကပ်ပြီး ကြို.တို.ကြဲတဲဖြစ်နေသော ပြောင်းခင်းများကိုလည်းမြင်နေရသည်။
ရွာသားအားလုံးပေါင်းစု ကောင်းမှုပြုသည့်အနေဖြင့် ရွာဦးကစေတီကိုတော့ ထုံးသင်္ဃန်း ကပ်မြဲကပ်ပါသည်။ သို.သော် တစ်မူးလောက်မှ မရသူတွေ တစ်ပဲတောင်မလှုနိုင်တော့ပြီ။ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကတော့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီးများ ပယ်သတ်ကြရန် ဒကာ၊ ဒကာမများအား တိုက်တွန်းပါသည်။
"ဒီနှစ်ရွာဘုရားပွဲမှာ ဖိုးချစ်ဇာတ်ထည့်ဖို. တစ်ရွာလုံးက အားခဲထားကြတာ။
ဘုရားပွဲကတော့ အစဉ်အလာဆိုတော့ ဖျက်လို.မဖြစ်ဘူး။
ဆရာတော်၏ အားလျှော့သံကို ကြားရသောအခါ စကားစုတချို.က ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲဝင်လာပါသည်။
"စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး။"
အရင်က မင်းတို.အကြောင်း စဉ်းစားရင် ငါ့ရွာကလူတွေကို ငါသနားတယ်။ အခုတော့ မင်းတို.လိုလူတွေတွေ.တိုင်း ငါဒေါသထွက်နေတတ်ပြီ။
မြန်မာ့ အမျိုးသား ကွန်ကရက်ကြီး ပေါ်ပေါက် လာရေး အတွက်ပါဝင်လိုလျှင်....
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစု များမှ မြန်မာ့အမျိုးသားကွန်ကရက်ကြီး (BNC) ဖြစ်ပေါ် လာ ရေး အတွက် ညီလာခံ တစ်ရပ် ကျင်းပမည်
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ မှ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ကျဆုံးရေးကို ထောက်ခံသော ၊ ၂၀၁၀ အတုရောင် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သော ၊ လူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုသော ၊ လူထုဘက်မှ မားမား မတ်မတ် ရပ်တည်သော မည်သည့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုမဆို ၊ တသီးပုဂ္ဂလ များ၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ ၊ တပ်ပေါင်းစုများ အားလုံးနှင့် လက်တွဲပြီး ညီညွတ်မှု ရှိသော နိုင်ငံရေး အင်အား ကောင်းသော စုစည်း မှုများဖြင့် ရန်သူ စစ်အုပ်စုအား အရှိန် အဟုန်ရှိစွာ တိုက်ပွဲ ၀င်နိုင်ရေး အတွက် ဖိတ်ခေါ် စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းမည့် မြန်မာ့အမျိုးသားကွန်ကရက်ကြီး ပေါ်ပေါက် လာရေး အတွက် ညီလာခံ တစ်ရပ် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဟံသာဝတီမှ သတင်း ရရှိပါသည်။
ထို မြန်မာ့အမျိုးသားကွန်ကရက်ကြီး ပေါ်ပေါက် လာရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုထွန်းထွန်း က ဟံသာဝတီသို့ မိမိတို့ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေ စီအင်အားစုများ (အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု) သည် မိမိတို့၏ မူဝါဒ ဖြစ်သော (၁) ၂၀၁၀ - ရွေးကောက် ပွဲအား လုံးဝ ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး (၂) စစ်အုပ်စုအား နည်းလမ်း ပေါင်းစုံဖြင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဝင်ရေး (၃) ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး စသည့် ဦးတည် ချက် များဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ လှုပ်ရှားမှု များကို ပြုလုပ် နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခု ပြုလုပ်မည့် ညီလာခံ သည် မြန်မာ့ အမျိုးသား ကွန်ကရက်ကြီး ပေါ်ပေါက် လာရေး အတွက် ပြင်ဆင်သည့် ညီလာခံ ဖြစ်ကြောင်း ထို မြန်မာ့ အမျိုးသား ကွန်ကရက်ကြီး ပေါ်ပေါက် လာရေး အတွက် စုပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်လိုလူ မည့်သည့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု မဆို ၊ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဆို အောက်ဖော်ပြပါ မြန်မာ့အမျိုးသားကွန်ကရက်ကြီး စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ (BNC Lobby Team) မှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူများ ဖြစ်ကြသော ဖြစ်ကြသော (၁) ဦးခေမာစာရ Phone : 718-413 3379 , Email : kmsr_abymu@yahoo.com (၂) ဦးပညာဇောတ Phone : 415-518 7663 , Email : thitsarko5@gmail.com (၃) ကိုရဲထွဋ် Phone: 347-226 0572 , Email : yehtut@yahoo.com (၄) ကိုထွန်းထွန်း Phone : 503-334 9997 , Email : htun9761@gmail.com (၅) ကိုထွန်းအောင်ကျော် Email : hagyaw@gmail.com (၆) ကိုသက်ထွန်း Phone : 602-254 5004 , Email : thethtun222@yahoo.com (၇) ကိုဇာနည် Phone : 801-410 4486 , Email : moenaing9964@yahoo.com (၈) ကိုကိုလေး Phone: 415-203 0541 , Email : kokophoto@yahoo.com (၉) ဒေါက်တာ ခင်စိန် Phone: 919-918 714 , Email : drk_sein@yahoo.com (၁၀) ကိုမင်းနိုင် Phone: 716-830 1684 , Email : bago8888@gmail.com (၁၁) ကိုခွန်ထွန်းတောက် Email : hkuntheinhtoon@gmail.com (၁၂) ကိုဆလိုင်းကိုကိုဦး Phone: 260-348 5950 , Email : kko102@yahoo.com (၁၃) ကိုမူးသာ Phone: 206-788 0394 , Email : mugoodluck1@yahoo.com (၁၄) ကိုထွန်းလှိုင် Phone: 518-209 6536 , Email : kyiwayphy0@yahoo.com (၁၅) ကိုစိုးမိုး Phone: 518-522 8253 , Email : soemoe62@yahoo.com (၁၆) ကိုစိုင်း Phone: 510-415 2289 , Email : sai18218@yahoo.com (၁၇) ကိုဇော်ကိုနိုင် Email : zaw_kk@yahoo.com တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ယခုလို ပြောပြ ပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ (အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု) သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု ၊ နယူယောက်ပြည်နယ် ၊ ယူတီကာမြို့ တွင် အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေသော ရဲဘော် ရဲဘက်များ ၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရဲဘော် ရဲဘက်များ ၊ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ စုပေါင်းကျင်းပသော ညီလာခံ မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစည ပါတီ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပါတီ ရံပုံငွေ ရရှိရန်..
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ (တစည) မှပါတီ ရှိ ကားများ ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပါတီ ရံပုံငွေ အကြောင်းပြ ပြင်ပသို့ ဌားရမ်း
စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) ၏ အမွေကို ခံယူလျက် ဖွဲ့စည်းထားသော တစည ပါတီသည် စစ်အစိုးရမှ ပါတီသို့ ပေးထားသော 929 ၊ 323 ၊ B600 နှင့် TE 11 ကားများကို ပါတီ ရံပုံငွေ အကြောင်းပြကာ ပြင်ပသို့ ဌားရမ်း အသုံးပြုခွင့် ပေးထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထို ပါတီကားများကို ပြင်ပသို့ ဌားရမ်း အသုံး ပြုခွင်ကို ထိုပါတီ၏ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကြီးက ခွင့်ပြု လုပ်ကိုင် စေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တစည ပါတီဝင် တဦးမှ အယခုလို ပြောပြ ပါတယ်။ ပါတီရှိ ကားများကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပါတီ ရံပုံငွေ ရရှိရန် ပြင်ပသို့ ဌားရမ်း အသုံးပြုခွင့် ပြုထား သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ၊ သို့သော် ထိုကားများကို ပြင်ပသို့ ဌားရမ်းသည်မှာ ပုံစံ အမျိုးမျိုး နှင့် ဌားရမ်း ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ လူတိုင်းအား ဌားရမ်းခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ၊ ပါတီ၏ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကြီး နှင့် ပတ်သက် သူများကိုသာ ဌားရမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပါတီ ရံပုံငွေဟု အကြောင်းပြ ထား သော်လည်း ထိုငွေသည် ပါတီအတွက် အသုံးမဖြစ် သောငွေသာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကြီး အကြိုး စီးပွားသာ ဖြစ်သွားကြောင်း ပြောပြပါသည်။
ပြင်ပတွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ဌားရမ်းခမှာ တစ်လလျှင် သိန်းကျော် ရှိသော်လည်း တစညပါတီမှ ပြင်ပသို့ ဌားရမ်းသည့် ဈေးနှုန်းမှာ မည်သူမှ မကြားဖူးသော ဈေးနှုန်းများသာ ဖြစ်သည်။ 929 ၊ 323 တစ်လဌားရမ်း ခမှာ ကျပ်သုံးသောင်း ၊ TE 11 ကားတစ်စီး တစ်လဌားရမ်းခမှာ ကျပ် နှစ်သောင်း နှင့် B600 တစ်စီး တစ်လ ဌားရမ်းခမှာ ကျပ် ရှစ်ထောင်သာ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုငွေသည် ပါတီသို့သွင်းရသော ငွေသာဖြစ်သည်။
ထို ပါတီ၏ ကားများကို ဌားရမ်း လိုသူများသည် ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင် ၂ ဦး၏ ထောက်ခံချက်၊ နေအိမ် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားမိတ္တူများ လိုအပ်သည်။ သို့သော် ထိုကားများကို ဦးခင်မောင်ကြီး နှင့် နီးစပ် ပတ်သက်သော သူများသာ ရရှိကြသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ သော တစညပါတီသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန်မှ စတင်ပြီး ယနေ့အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း စစ်အစိုးရ၏ ပြည်သူ လူထုအပေါ် ကြီးမားသည့် ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကို ဝေဖန်မှုမရှိ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ၏ မှားယွင်းသော စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး မူဝါဒများကိုလည်း တစုံတရာ ထောက်ပြပြောဆို ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သောပါတီဖြစ်သည် ။ ပါတီရှိ တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ကြီး အပါအ၀င် ဗဟိုကော်မတီ များသည် စစ်အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နှင့် အတူ မဆလ ပါတီတွင် ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရှိ သူများ အဖြစ် ပူးတွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ကြ သူများ ဖြစ်သည့် အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နည်းတူ မိမိ မိသားစု အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရေးကိုသာ လုပ်ဆောင် နေသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
http://ifile.it/xly0nzbUtf-8''Instruction of NLD to Form CC_Jan10
http://ifile.it/sy6h4jxA Letter of Condolence From SYCB
BY YeYint Nge ... 1/30/20100comment
နအဖ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ပြည်သူ့ပျောက်ကျားတပ်ဦး၏ တုန်.ပြန်ချက်
ယခုတလော န အ ဖ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုသတင်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖေါ်ပြနေတာကို တွေ့နေရပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ န အ ဖ ဟာ ကိုယ့်ဗုံးကိုယ်ဖောက် နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်သူတွေကို လိမ်လည် မျက်လှည့်ပြဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ၂၀၁၀ မှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ NLD ရဲ့ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ကြောင့် အကျပ်ရိုက်နေတဲ့ နအဖ ဟာ ဟိုနေရာဗုံးဖောက်ပြ ဒီနေရာဗုံးဖောက်ပြနဲ့ ပြည်သူတွေကို ခြိမ်းခြောက်လျှက် အကောက်ကြံဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတော့သည်။
ဒေသဆိုင်ရာတပ်ရင်းတချို့ကို လျှိ့ဝှက်ညွန့်ကြားမှုများပြုလုပ်ထားပြီး ဖောက်ခွဲရေးတာဝန်ကျ သူတစ်ဦးကို နယ်မြေရဲစခန်းမှ လက်နှက်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမှိသော်လည်း မည်သို့မျှအရေးယူ ဆောင်ရွက်ခွင့် မရပဲ အဆိုပါသူအား ၄င်းတို့၏တပ်ရင်းမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ပြင်ပ မီဒီယာများသို့ မပေါက်ကြားစေရန် အထူးညွန့်ကြားထားကြောင်းသိရပါသည်။
ဒါကြောင့် န အ ဖ ရဲ့ကောက်ကျစ် ရက်စက် ယုတ်ပတ်တဲ့ ဥာဏ် နီ ဥာဏ်နက် တွေကို ၅၅သန်း ကျော်ရှိ ပြည်သူလူထုက သတိရှိရန် ရန်အထူးလိုအပ်နေပြီး အခုလည်းပဲ မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခံရပြန်ပါသည်။ ဒါတွေဟာလည်း န အ ဖ လက်ပါးစေတို့ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း အပြစ်ရပ်အဖွဲများ ခန့်မှန်းကြပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နအဖ ခွေးယုတ်တွေကတော့ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် သုံးပြီးအကောက်ကြံနေကြပါပြီပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအားလုံး သတိရှိရန်အထူးလိုအပ်နေပါတော့သည်။
ဗုံးဖောက်ခွဲတဲ့ တကယ့်တရားခံတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်....
http://ifile.it/8gafe07 30 Jan Yeyintnge's Diary
“ကြွေးကြော်သံ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော် စဉ်းစားမိတာ ပြောပါ့မယ်။ နည်းနည်းရှည်ရှည် ရေးပါရစေ။
၁၉၄၅ မှာ ရဲဘော်ကြီးသိန်းဖေ (မြင့်) အိန္ဒိယက ပြန်ရောက်လာ ပါတယ်။ အဲဒီကာလ ၁၉၄၅/၄၆ က လူထုက နိုင်ငံရေးအရ သိပ်တက် ကြွနေတာပါ။ အစည်းအဝေးတွေ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ကြွေးကြော်သံတွေ အများကြီး ကြွေးကြော် ကြပါတယ်။ အခုခေတ်လို “တို့အရေး” လို့ ယေဘုယျကြွေးကြော်တာ သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ “စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရုတ်သိမ်းပစ်” “အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထွက်သွား” “စက္ကူဖြူ စီမံ ကိန်းအလိုမရှိ” စသဖြင့် လက်တွေ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းကို ထင်ဟပ်တဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ရဲဘော်ကြီး သိန်းဖေ(မြင့်) က လူထုဆန္ဒပြပွဲ ချီတက်ပွဲတွေမှာ ကြွေးကြော်ကြတဲ့ “ကြွေးကြော်သံ” နဲ့ ပါတီရဲ့ “သေနင်္ဂဗျူဟာ ကြွေးကြော်သံ” (strategic slogan) ကွဲပြားစေဖို့အတွက် slogan ကို “ဆောင်ပုဒ်” လို့ ဘာသာပြန်ဖို့ အဆိုပြုဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူပြောတာ မဆိုးပါဘူး၊ စဉ်းစားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ slogan ကို “ကြွေးကြော်သံ” လို့ အများနားလည် အထိုင်ကျနေပြီဖြစ် လို့ “ဗကပ” က မပြင်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
• “ကြွေးကြော်သံ” မှာ လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးကို ချုပ်ပြီးပြောတဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာ (strategic) “ကြွေး ကြော်သံ” ရှိရပါမယ်။ “စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်ပြီး ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ စနစ်ထူထောင်ကြ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံဟာ “သေနင်္ဂဗျူဟာကြွေးကြော်သံ” ပါ။ ဘာကို တိုက်ဖျက်မယ်၊ ဘာကိုထူထောင်မယ်ဆိုတာ ပါနေပါတယ်။ ကာလအတော်ကြာကြာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပါ။
• “လက်တွေ့နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံ” ကျတော့ ကာလကလေးတခုအတွက်ပဲ ကြွေးကြော်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် “စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရုတ်သိမ်းပေး” “စက္ကူဖြူစီမံကိန်း အလိုမရှိ” လိုဟာမျိုးကစပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ ဆန်အလုံအလောက် ရရှိရေး၊ လာဘ်စားတဲ့ အရာရှိ အရေးယူရေးတို့လို လက်တွေ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို ကြွေးကြော်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို နည်းပရိယာယ် (tactical) ကြွေး ကြော်သံလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ “အောက်တိုဘာ ကျောင်းတလပိတ်ရေး” တို့ “သမဂ္ဂထူထောင်ခွင့်ရရေး” တို့လိုဟာလည်း “နည်းပရိ ယာယ် ကြွေးကြော်သံ” တွေပါပဲ။
(၁) နောက်ပြီး “ကြွေးကြော်သံ” မှာ မကြောက်တရားသွင်းပေးတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ၊ အားတင်းတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေလည်း ရှိရပါ တယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းကို ရွေးရတော့မယ့် အခြေအနေကိုရောက်တော့ ယေဘုယျကြွေးကြော်သံ “သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ” ဆိုတာလောက်နဲ့ မရတော့ပါဘူး။ “မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ရှို့” “သူပုန်သူပုန် ထထ” “ဖိရင်ကြွမယ် ထိရင်ချမယ်” “လာမယ့်ဘေး ပြေးတွေ့” စတာတွေ ကြွေးကြော်ခဲ့ရပါတယ်။
- ဒီနေရာမှာ ဖြတ်ပြောချင်တာတခုက အကြမ်းမဖက်ရေးဟာ ကြွေးကြော်သံ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ပွဲနည်းနာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
- တိုက်ပွဲဝင်ကြွေးကြော်သံတင်ရင် စည်းရုံးရေးကလည်း တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ စည်းရုံးရေးပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂက (၁၃ဝဝ ပြည့်မှာ) အတွင်းဝန်ရုံးဝိုင်းတုန်းက ပုံမှန်စည်းရုံးရေးသဏ္ဌာန်ပါပဲ။ နောက်တော၊့ ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံးပြီးတော့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုလှရွှေကို “ကျောင်းသားအာဏာရှင်” အဖြစ် တင်ပါတယ်။ သူက သူ့နာမည်နဲ့ပဲ ညွှန်ကြားချက်တွေ ထုတ်ပါတယ်။ ဒါက အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ကိုလိုနီဒီမိုကရေစီ ကာလကမို့ လုပ်နိုင်တာပါ။ ဖက်ဆစ်အောက်မှာ လုပ်မရပါဘူး။ မြေပေါ် ဥပဒေတွင်းအနေနဲ့ လုပ်မရပါဘူး။ မြေ အောက်ယူဂျီအနေနဲ့ပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန့်လက်အောက်မှာ လူထုဆန္ဒပြပွဲ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ အငွေ့အသက်ကလေးရှိရင် စည်းရုံး ရေးပုံသဏ္ဌာန်တမျိုး ဖက်ဆစ်အောက်မှာဆိုရင်တမျိုး ဖြစ်မှရပါမယ်။
(၂) ဝါဒဖြန့်တဲ့ကြွေးကြော်သံ၊ လှုံ့ဆော်တဲ့ကြွေးကြော်သံ၊ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားတဲ့ကြွေးကြော်သံဆိုတာကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကြွေးကြော်သံဆိုတာကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကြွေးကြော်သံကတော့ တခုတည်းပါ။
“ဘုရင့်နိုင်ငံ စနစ်ကိုဖျက်သိမ်း သမ္မတနိုင်ငံစနစ်ထူထောင်” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ တခုတည်းပဲ ပြင်သစ်၊ ရုရှားနဲ့ တရုတ်တော်လှန် ရေး (အစောပိုင်း) တွေမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
လူထုမနိုးကြားသေးခင်မှာ ဒီကြွေးကြော်သံရဲ့တန်ဖိုးက ဝါဒဖြန့်ချိတဲ့တန်ဖိုးပဲ ရှိပါတယ်။ လူထုက တစုံတရာနိုးကြားနေပေမယ့် မထကြွဝံ့သေးရင် အဲဒီကြွေးကြော်သံမှာ လှုံ့ဆော်ရေးတန်ဖိုး ပါလာပြီ။ လူထုက လက်တွေ့ထကြွနေပြီဆိုရင် ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ညွှန်ကြားတာအထိ တန်ဖိုး တက်သွားပါတယ်။
ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးလက်တွေ့နဲ့ ထင်ဟပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် “ဒီမိုကရေစီရေး တို့အရေး” ကြွေးကြော်သံဟာ အစောကြီးကတည်းက ပေါ်နေတာပါ။ ၁၉၅၈ စစ်အုပ်စု အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက ၁၉၄၈ ကတည်းက ပေါ်နေတာပါ။
ဓနရှင်ဒီမိုကရေစီစည်းဝိုင်းက ကျဉ်းလာလေလေ ဒီကြွေးကြော်သံကို ကြွေးကြော်သူ များလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်ကစပြီး နောက်ဆုံး ဦးနု၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းအထိ ကြွေးကြော်လာတယ်။ ဒါက ၁၉၈၈ မတိုင်မီအထိကို ပြောတာပါ။
၁၉၈၈ မှာကျတော့ စစ်အုပ်စုဝင်ဟောင်းတွေပါ ဒီမိုကရေစီရေး တို့အရေး ဖြစ်လာပါတယ်။
ကြွေးကြော်သံတူပေမယ့် အလုပ်မတူကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ - အတွေးအခေါ်မတူလို့ပါ။ အမြင်မတူလို့ပါ။ ရပ်တည်မှုမှာတောင် ၂ ခွ ဖြစ်နေသူ ရှိတယ်။
- ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေက သိပ်မြန်တယ်။ အမီမလိုက်နိုင် ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါက ကိုယ့်ဘက်မှာသာ ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်နေ ဝင်း ဘက်မှာလည်း ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အာဏာမဲ့တယ်။ တကွဲတပြားစီ ကျဲပြန့်နေတယ်။ သူတို့ဘက်က အာဏာရှိ တယ်။ တစုံတရာ စုစည်းမိထားတယ်။ သူတို့က လူထုကို အခြေခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ဗျူရိုကရေစီယန္တရားကို အခြေခံတာ ဖြစ်တယ်။
- နောက်ဆုံးတော့ “ဓားပါတဲ့ကုလားက စားသွား” တာပါ။ ဒီသင်ခန်းစာကို မမေ့ကြဖို့ လိုပါတယ်။
The Voice Weekly Joural Monday, February 1 -7, 2010
The Voice 6-13
SYCB မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလူငယ်များ ကွန်ယက်၏ ကရင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့နှင့် မွန်အမျိုးသားနေ့တို့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
- မောင်စူးစမ်းအပေါင်းအပါများနဲ့ ဗကပ
မောင်စူးစမ်း (ရဲဘော်တင်ရွှေ၊ ဦးချမ်းအေး) ကိစ္စ
- မောင်စူးစမ်းနဲ့အပေါင်းအပါများနဲ့ပတ်သက်၍ ဗကပ ရဲ့ သဘောထား (၂၉- ၁- ၂၀၁၀)
http://ifile.it/az601mpHero to Zero-1
29 Jan ဒိုင်ယာရီ
http://www.scribd.com/doc/26078519/29-Jan-2010-yeyintnge-s-Diary29 Jan 2010 yeyintnge's Diary
BY YeYint Nge ... 1/29/20100comment
ဟတီ ကယ်ဆယ်ရေးက မြန်မာနာဂစ်ထက် ပိုမိုသာလွန်
ဟေတီ ကယ်ဆယ်ရေးက မြန်မာနာဂစ်ထက် ပိုမိုသာလွန်
Friday, 29 January 2010 17:35 ဆိုင်မွန် ရောက်ဂ်နင်း
ပို့တ် အော်ပရင့်စ် (PORT-AU-PRINCE)၊ ဟေတီ။
ဟေတီ ကပ်ဘေးသို့ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများ နှေးကွေး နေသည်က နာမည်ပျက် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ရမည့်ကိစ္စ မဟုတ်သော်မှ အတော်လေးတော့ ရှက်စရာ ကောင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျ ပျက်စီးသွားသော ပို့တ် အော်ပရင့်စ် ရှိ ကက်သိုလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တကျောင်း ရှေ့တွင် ဟေတီ တဦး ၀တ်ပြုဆုတောင်း နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
ပြီးခဲ့သည့် အပတ်အတွင်း မိမိတွေ့ခဲ့ရသမျှ ငလျှင် ဘေးမှ ကံကောင်း ထောက်မ၍ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ကြရ သူများအနေနှင့် အစားအစာ၊ ရေနှင့် အခြေခံ အမိုးအကာ ကဲ့သို့သော ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ အမျိုးအမည် တခုမျှ မရရှိကြသေး သူများ ရှိနေသလို၊ သူတို့ နေထိုင်ရာ မြို့ဘက်ပိုင်းဆီသို့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သား တဦးတလေမျှ ရောက်မလာ ကြသေးသည်ပင် ရှိနေသည်။ မိမိသည်ပင် ပထမဦးဆုံး တွေ့ရသည့် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်သည်ဟု တချို့သူများက ဆိုနေကြဆဲပင်။ ဤအချိန်သည် သဘာဝ ကပ်ဘေးကြီး ကျရောက်ပြီး တပတ် ကျော်လွန် လာသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်များကို လုံးဝအလိမ်အညာဟု ငြင်းပယ်လိုက်ရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူတချို့က အရေးပေးခံလိုသည့် အတွက်ကြောင့် သူတို့၏ လမ်း၊ ရပ်ကွက်များ ပစ်ပယ်လျစ်လျူရှုခံရကြောင်း ချဲ့ကားပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ယူဆ နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ ဤသို့ နေရာတိုင်းတွင် တွေ့နေ ကြားနေရသည့် စောဒကတက်တောင်းဆိုနေမှုများက ချဲ့ကားပြောသည်ထက်စာလျှင် အမှန်အတိုင်း ပြောနေခြင်း ပိုဖြစ်တန်ရာသည်။
ဟေတီအစိုးရ ကိုယ်နှိုက်က ရဲစခန်းတဲငယ်တခုအတွင်း စည်းဝေး စုဆုံနေကြရပြီး ကြောက်ရွံ့နေသည့် သမ္မတ ရီနေး ပရီဗယ် (Rene Preval)က လူအများ၏ လိုအပ်ချက်ကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ အရေးပေးမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အတွက် ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံနေရသည်။
ပို့တ် အော်ပရင့်စ် မြို့တော်ရှိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကလည်း ပြေလမ်းတကြောင်းသာ ရှိသည်။ ငလျှင်လှုပ်စဉ်ကာလအတွင်း လေယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေး မျှော်စင်ကလည်း ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ ဆိပ်ကမ်းကလည်း ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ကာ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့တိုင် အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ရှိနေခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စစ်တပ်ကိုလည်း ဝေဖန်မှုများ ရှိနေပါသည်။ လေဆိပ်ကို စတင်ထိန်းချုပ်စဉ်နေ့များက ကယ်ဆယ်ရေး ကုန်တင်လေယာဉ်များထက်စာလျှင် စစ်တပ်လေယာဉ်များကို ဦးစားပေးနေခဲ့သည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ ခင်ပွန်း ကုလသမဂ္ဂ၏ ဟေတီ အထူး သံကိုယ်စားလှယ် ဘီလ်ကလင်တန် ရောက်လာသည့် ခရီးစဉ်တွင် လေဆိပ် နှင့် လေပိုင်နက်ကို ခေတ္တ ယာယီပိတ်ပင် ထားမှု အပေါ် ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
ဟေတီပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုး၍ ဖြည့်ဆည်းလာနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကြီးမားလှသည့် ငလျင် ဒဏ်ကြောင့် ထောက်ပံ့ရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အဦများလည်း ပျက်စီးခဲ့ရာ NGOများ ကချည်း ဖြေရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ NGOများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး အပါအ၀င် တခြားသော အရင်းအမြစ်များကိုပါ အကန့်အသတ်ကြီးစွာ ရင်ဆိုင် နေကြရ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်လည်း အစိုးရများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးများကို မှီခို နေကြရသေးသည်။
သို့သော်လည်း ဤသို့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေမှုများနှင့် အခက်အခဲများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလက ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းမျှ ဆိုးပါ၏လောဟု စောကြောဖွယ် ရှိနေသည်။ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက သဘာဝကပ်ဘေး နှစ်ခုစလုံးတွင် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရသူ တဦး၏ အမြင်ကို မေးကြည့်နိုင်ခဲ့သည်။
GOAL အဖွဲ့၏ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူး ဘရိုင်ယန် ကက်ဆေး (Brian Casey) က ငလျင်ဘေး ကြီးသင့်ပြီး ၃ရက်အကြာတွင် ပို့တ် အော်ပရင့်စ် သို့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ ပိုစော၍ ရောက်လာသင့် သည်။ သို့သော်လည်း လေဆိပ်ကိုယ်နှိုက်က ပျက်စီးသွားသည့်အတွက်ကြောင့် လေယာဉ်များ မဆင်းနိုင် ဖြစ်နေရသည်။ နယ်စပ်ချင်းကပ်လျက် ကားဖြင့်သွားလျှင် ၅ နာရီခရီးကြာ ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံ ဆန်တို ဒိုမင်းဂိုးသို့ လေယာဉ်များက လမ်းကြောင်းလွှဲ ပျံသန်းဆင်းသက်ခဲ့ကြရသည်။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ဆိုရလျှင် နာဂစ်မုန်တိုင်းသတင်း ကြားကြားချင်း သူက အငတ်ဘေးကျရောက်နေသည့် အီသီယိုပီးယား မှ ချက်ချင်းထွက်ခွာ၍ ရေလုံးအမြင့် ၃. ၅မီတာ၊ လေတိုက်နှုန်း တနာရီ ၁၃၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကို တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် နောက်တနေ့ညတွင် ဘန်ကောက်သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းရသည်မှာ ဤမုန်တိုင်း အတွင်း လူပေါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ကျော်၏ အသက်များလည်း တိုက်ခတ်လွင့်စင်ခဲ့ပုံရသည်။ သို့သော်လည်း ယခုတိုင် ကိန်း ဂဏန်း အတိအကျကို မသိရှိနိုင်ခဲ့။ ဟေတီရှိ ယခု ငလျင်ဘေး အသေအပျောက်ကိုမူ ၂ သိန်းခန့်အထိ ရှိနိုင်သည်ဟု အစိုးရကိန်းဂဏန်းများက ခန့်မှန်းကြသည်။
"ကျနော်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၉ ရက်ကြာ မြန်မာပြည်ဗီဇာရဖို့အရေး အချည်းအနှီး စောင့်နေရတယ်၊ ၁၀ ရက်မြောက်နေ့မှာ သီရိလင်္ကာမှာလျှောက်ရင် ဗီဇာရနိုင်တယ်လို့ ကြားတော့ ကိုလံဘိုကို ပြေးကြရပြန်တယ်"ဟု မစ္စတာ ဘရိုင်ရန် ကက်ဆေး က ပြောသည်။
ဗီဇာရရှိသည်နှင့် ကက်ဆေးနှင့် သူ၏ GOAL အဖွဲ့မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက လေဘေးမုန်တိုင်းသင့်ပြီး ၁၂ ရက်ကြာမှ ရန်ကုန်သို့ ခြေချနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့နောက်ကျနေသော်မှ သူတို့က အရေးပေါ်ကာလ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ပထမဦးဆုံး ရောက်ရှိလာကြသည့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများတွင် အပါအ၀င် ဖြစ်နေသေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများရှိနေပြီးသား လက်တဆုပ်စာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနများနှင့် အနည်းစု NGOအဖွဲ့များကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပေ။
"နာဂစ်မှာ အကူအညီပေးဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့သူတွေ ရာနဲ့ချီတယ်၊ အများစုက ဒီထက်ပိုပြီး ဘာမှ ဆက်လုပ် လို့မရဘူး။ ကျနော်ပြောနေတာက အသက်တွေအများအပြား ကယ်ဆယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကို ပြောတာပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ၀င်လို့ မရကြဘူး"ဟု ကက်ဆေးက ဆိုသည်။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက ပို့တ် အော်ပရင့်စ်ရှိ ကက်ဆေးနှင့် ဟေတီငလျင်ကြီးဖြစ်ပြီး၍ ၁၀ ရက်အကြာတွင် မေးမြန်းစကား ပြောဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများက နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသည်ဟု ၀န်ခံရဖို့ ရှိနေသော်လည်း၊ ကက်ဆေး က ပြောသည်မှာ "GOAL အဖွဲ့ထံကနေ လူပေါင်း ၇,၀၀၀ လောက်က အစားအသောက်၊ အမိုးအကာတွေ ရကြပြီ။ နောက် ထပ် ၄၈ နာရီအတွင်းမှာပဲ ငွေကြေးတစုံတရာ ၀င်ငွေရစေဖို့ အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ် (Cash for Work Projects) ကို စတင်နိုင် မယ်"ဟု ဆိုသည်။
ဤကဲ့သို့ အချိန်မျိုးမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးစ ကက်ဆေးနှင့် သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ၀င်ခွင့်ရရန် အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေကြရဆဲ အချိန်မျိုးဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့ ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ မြို့က အမှောင်ထဲမှာ၊ နောက်ထပ် ၇ ပတ်တိုင်တိုင် လျှပ်စစ်မီးက လာလိုက် ပျက် လိုက်နဲ့ပဲ"ဟု ကက်ဆေးက ပြောကြားလိုက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ လျှပ်စစ်တင်ပို့ရောင်းချရငွေ ဒေါ်လာသန်းထောင်ချီ၍ ၀င်နေစဉ် တွင် မြန်မာလူထုမှာမူ လျှပ်စစ်မီး မရှိဘဲနေထိုင်နေကြရသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဟေတီနိုင်ငံနှင့် မတူသည့်အချက်က မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသည်။ သို့သော်လည်း အကြမ်းဖက်မှု များနှင့် အရည်အချင်းမရှိသည့် စစ်ခေါင်းဆောင်များ လက်တွင်းတွင် နစ်မွန်းဆုတ်ယုတ် နေရသည်။ ဟေတီနိုင်ငံတွင် လည်း မကောင်းသည့် အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၀မ်းနည်းဖွယ် ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်း ရှိပါသည်။ သို့ သော် ထိုနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုရောင်းစား မှီခိုမည့်အစား၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ များအတွက် လက်ဖြန့်တောင်းရမည်ကို ရှက်မည့်သူများ မဟုတ်ပေ။
မြေငလျင်ဒဏ် မခံရမီကပင် အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင်အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတခုဖြစ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုများ၊ တန်ပြန်စစ်အာဏာသိမ်းမှုများ၊ အစိုးရရဲများနှင့် ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင်များ၊ အကြမ်းဖက် လူမိုက်ဂိုဏ်းများ၏ ရမ်းကား နှိပ်စက်မှုများကြောင့်လည်း ဟေတီနိုင်ငံက ယိုယွင်းကျဆင်းနေခဲ့ရသည်။
ဝေငှပေးသည့် အစားအစာ များကို အလုအယက် တောင်းခံယူနေသော ဟေတီ ငလျင် ဒုက္ခသည်များ (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နာဂစ် မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသို့ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများ အရောက် ပေးပို့နိုင်ရေး အတွက် GOAL အဖွဲ့က အမိုး အကာများ၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်း သေတ္တာများကို ရန်ကုန်တွင် မတန်တဆ ဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ယ်ကြရသည်။ တချို့သော မြန်မာနိုင်ငံသား စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများက ကပ်ဘေးသင့် ဒေသ များသို့ အကူ အညီ ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင် ပို့ပေးခဲ့ ကြသည်။ ဤအချိန်တွင် သူတို့အဖွဲ့က အချိန်ကုန် ခက်ခဲပင်ပန်း သည့် တရားဝင် NGO အဖြစ် မှတ်ပုံ တင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကို ဆောင်ရွက် နေကြရပြန်သည်။
"ကျနော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံအဖွဲ့တွေက နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြရတာ စိတ်မသက် မသာ ဖြစ်နေကြတယ်၊ သူတို့က ကူညီချင်ပါတယ်။ သူတို့ အများစုက သူငယ် ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ မုန်တိုင်းထဲမှာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ သူတို့က ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း သိကြတယ်"ဟု ကက်ဆေးက အမှတ်တရ ပြန်ပြောသည်။ ထိုဒေသခံများသည် မြန်မာစစ်တပ်၏ စောင့်ကြည့်ခံနေရမှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုများကို အကြောင်းပြု၍ နောက်ဆုတ်သွားကြသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
"တချို့မြန်မာတွေက ကျနော်တို့နဲ့ စကားပြောရမှာ အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့လည်း သတင်း အချက်အလက်တွေ မရတော့ဘူး၊ သူတို့က ကျနော်တို့နဲ့ တတွဲတွဲ ဖြစ်နေတာ အမြင်မခံလိုကြဘူး။ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က သင်္ကာမကင်း ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်တယ်"ဟု ကက်ဆေး က ပြောသည်။
"ဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့ နေရာအထိ ကျနော်တို့ သွားလို့ မရဘူး။ အဲသည်တော့ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ဝေငှပေးဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင် ဘူး။ ကျနော်တို့ မစောင့်ကြည့်နိုင်ဘူး။ ဆန်းစစ်တာတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အကူအညီတွေက တကယ်လိုအပ်နေသူ တွေ လက်ထဲ ရောက်သလား၊ မရောက်သမလား သေချာ မစစ်ဆေးနိုင်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့်ပဲ အလှူရှင်တွေ အစိုးရတွေက ကျနော်တို့ကို ငွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ ခက်လာကြတယ်"ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ကက်ဆေးက"ဟေတီ ကယ်ဆယ်ရေးမှာ ယေဘုယျပြောရင် အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်တို့ ၄ လ ကူခဲ့တာထက်စာရင် ဟေတီမှာ ၉ ရက်အတွင်း ပိုလို့ ကူညီနိုင်တယ်"ဟု ဆိုသည်။
"အခု ဟေတီမှာ ရှိနေတဲ့ အခက်အခဲက မြန်မာပြည်နဲ့ ကွာခြားတယ်။ ဟေတီက အခြေခံအဆောက်အဦစနစ်တွေက ငလျင်မတိုင်ခင်ကတည်းက ဒီလောက် မကောင်းဘူး။ ဒါတွေက ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်မှာ အကုန်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်"ဟု သူက ပြောသည်။
သဘာဝကပ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ပါသလို၊ တဘက်တွင်လည်း လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပိတ်ဆို့နေကြရသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာပြည်တွင် တွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲများကတော့ လူက ဖန်တီး ထားသည့်ကိစ္စများဟု ကက်ဆေးက ပြောသည်။
"တကယ့် အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာမှ အစိုးရက ကန့်လန့်ခံနေ တယ်"ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
ကက်ဆေးက ပြောရာတွင် အကူအညီများ နိုင်ငံတွင်းရောက်ရှိရေးနှင့် နိုင်ငံအနှံ့ ရောက်ရေးအတွက် ဟေတီအစိုးရ သို့ မဟုတ် ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားများက အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတားပြုခြင်း မရှိဟု ပြောသည်။ ရန်ကုန်တွင်နေခဲ့သော ၇ ပတ်ကြာ ကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍လည်း"GOAL အဖွဲ့က အဲဒီမှာ စုစုပေါင်း ၄ လကြာတယ်။ ကျနော်တို့ကို မြို့တော်က လွဲပြီး အပြင်ထွက်ခွင့် မပေးဘူး"ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
သို့တိုင် ငလျင်ပြီးနောက်ပိုင်း လူထုကို ကူညီကယ်ဆယ်ရန် မစွမ်းနိုင်သေးသည့်အတွက်ကြောင့် ဟေတီအစိုးရကို ပြစ်တင် ဝေဖန်မှုများ အကျယ်အပြန့် ရှိနေပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ကျနော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ခဲ့သော ငလျင်ဒဏ်မှ ကံကောင်းထောက်မ၍ ရှင်ကျန်ရစ်သူများက သဘာဝ ကပ်ဘေးပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့ခေါင်းဆောင်များက ပုန်းအောင်းနေကြသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ တချို့သူများ ကမူ အကူအညီများကို ဟေတီအစိုးရဌာနများ လက်ထဲ မထည့်ပေးရေးအတွက် စာရေးသားရန် အကြံပြုကြသည်။ တချို့ သော လေ့လာဆန်းစစ်သူများ၏ ပြီးခဲ့သည့် ၃-၄ နှစ်အတွင်း ဟေတီတွင် တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့သည်ဟူသော သုံးသပ်ချက် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျနော်က ဝေဖန်ငြင်းပယ်သည့်ကိစ္စအပေါ်တွင်လည်း မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။
ပို့တ် အော်ပရင့်စ်မြို့တော် ကာဖိုးခရိုင် (Carrefour district) နှင့် နီးကပ်နေသည့် ငလျင်ဒဏ် အဆိုးရွားဆုံး ခံရသော ဖွန်တာမာရာရှိ ပယ်ရီ ရော်နယ်ဒ် (Pierre Ronald) က ပြောရာတွင်"ရေဒီယိုမှာ ကြားရတာက အမေရိကန်နဲ့ တခြားနိုင်ငံ တွေ က ဟေတီကို ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ (ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအနေနဲ့) နှစ်စဉ် ပေးနေတယ် ပြောတယ်။ ကျနော် တို့ လည်း ဘာမှ မတွေ့ရဘူး။ လုံးဝလိမ်တာ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီငွေတွေ တနေရာရာကို ရောက်သွားပြီပဲ။သေချာတာက ဒီကို တော့ ပို့တာမဟုတ်ဘူး"ဟု သူက ဒါဇင်အနည်းငယ်ခန့်ရှိ ဒုက္ခသည် မိန်းမနှင့်ကလေးများ နေ့လယ်ခင်းနေရောင်ဒဏ် ကို ပလတ်စတစ် အမိုးအောက်တွင် ခိုလှုံနေကြရသည့် ပလာဇာ တနေရာအား လက်ညှိုးညွှန်ရင်း ပြောသည်။
ဟေတီအစိုးရကို ဝေဖန်သူများ ရှိကြပါသည်။ သူတို့ဝေဖန်နေကြသည်မှာလည်း မှန်သည့်အချက် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လည်း အနည်းဆုံးတော့ ဤသို့ဝေဖန်နေကြသည်မှာ အစိုးရက ကြားဝင်ဟန့်တားနေသောကြောင့် မဟုတ်ပေ။
ကက်ဆေး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရဆိုလျှင် မြန်မာစစ်အစိုးရကမူ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ မရောက်နိုင်ရန် နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လူပေါင်း ၃ သန်းခန့်ကို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ပြစ်ထားပြီး ပျက်စီးသွားသည့် ဒေသတခုလုံးကိုလည်း လက်ပိုက်ကြည့်နေသည်ဟု ပြောသည်။
နှစ်နှစ်ခန့် ကြာသည့်တိုင် လူထုကို ကယ်ဆယ်ရန်လာသည့် အကူအညီများအား ပိတ်ဆို့ဟန့်တားရုံမျှသာမက၊ ကပ်ဘေး ကာလနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် လျစ်လျူရှုနိုင်သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကို သူ ယခုတိုင် နားမလည်နိုင်သကဲ့သို့ ဒေါသဖြစ်နေရသေးသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
"သေသူတွေရဲ့အလောင်းတွေ ရေကန်ထဲမှာ၊ မြစ်ချောင်းတွေထဲမှာ မျောနေတာ ဒီအတိုင်းထားတော့ ရေကြောင့်ကူးစက် တဲ့ရောဂါတွေ ပျံ့ပွားအောင် တမင်အားပေးနေသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဆေးဝါး အထောက်အပံ့တွေကို အကူအညီပေးဖို့ တားဆီးနေတာ၊ လျစ်လျူရှုထားတာတွေ ရှိနေတော့ ဒီရောဂါဘေးတွေကနေ လူတွေခုခံကာကွယ်လို့မရအောင် လုပ်ထား သလို ဖြစ်နေတယ်"ဟု ကက်ဆေးက ပြောဆိုသည်။
"ကျနော် အသေအချာ ယုံကြည်နေတာကတော့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ပြီးတဲ့နောက်မှာ စစ်အစိုးရကိုယ်နှိုက်က နောက်ထပ် အရေးပေါ်ကပ်ဘေးတခုကို ဖန်တီးရှာဖွေနေသလိုပဲ။ ရောဂါဘေးတွေ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ သောက်သုံး ရေပြတ်လပ်မှု၊ လျစ်လျူရှု ထားမှုတွေက ဒုတိယမုန်တိုင်းရဲ့သေမင်းတမန်လှိုင်းလုံးလို လိုက်လာတယ်"ဟုလည်း ကက်ဆေး က ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့်မူ သူလိုချင်သည့် ရလဒ်ကို ရခဲ့ပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
SIMON ROUGHNEEN ရေးသားသည့် Haiti Aid Response Far Better than Nargis ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြ ပါသည်။
တိုးချဲ့စီအီးစီနှင့် လာတော့မည့် စီစီ အသစ်
ရန်ငြိမ်းအောင် (လူငယ်) | သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၁၄ မိနစ်
အင်အားတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စီအီးစီ (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ) အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကြားတွင် ဝေဖန်မှု မရှိသကဲ့သို့ စိတ်ဝင်စားမှုလည်း သိပ်မရှိကြပါ။ သို့သော် အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း လှုပ်ရှားနေသူများ၊ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် နီးစပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အမျိုးမျိုး ပြောနေသံများ ကြားရပါသည်။
“ဘာမှမထူးပါဘူး၊ အသစ်ပါလာတဲ့ သူတွေကလည်း အစက လုပ်နေကျ အလုပ်တွေပဲ လုပ်နေတာပဲ။ အရင်လူဟောင်းတွေကလည်း ဒီအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး ဒီအတိုင်းပါပဲ” ဟူသော ဝေဖန်ချက်မှာ မှန်သလောက် မှန်ပါသည်။
သို့သော် .. ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားသော စီအီးစီ၏ ပထမဆုံးသော အစည်းအဝေးတွင် စီစီ (ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့) ကို ပြန်ဖွဲ့ရန် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် စည်းကော်မတီများထံမှ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုမည့်သူ (nominee) များ တောင်းတော့မည်ဟု ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ တခါမှ မကြားဖူးသော အသံကို ကြားရခြင်း ဖြစ်၍၊ အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာရပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင်ပင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရ အရေးယူရန်ရှိသည့် ကိစ္စများကို စည်းရုံးရေးနည်းအရ ဖြေရှင်းရန် ဆွေးနွေးကြသည်ဟု ကြားရပြန်သောအခါ၊ စီအီးစီ၏ ယခင်က လုပ်ဟန်များ ပြောင်းလာသလိုလို ထင်ရပါသည်။
စီအီးစီ-စီစီ မည်သို့ပင် ဖွဲ့စည်းပါစေ အမှန်တကယ် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ ချမှတ်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်သေးပါ။ အဖွဲ့ချုပ် မည်သို့ဆက်လက်ရပ်တည်မည်၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဆက်လက်လှုပ်ရှားမည် ဆိုသည်တို့မှာ၊ နအဖက ယခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်မည်ဆိုသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်မဝင် ဆိုသည်နှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ အဖွဲ့ချုပ်က စွဲကိုင်ထားသော ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းအရလည်း ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ မထွက်သေးဘဲ၊ ထွက်သည့်တိုင်အောင်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မဖြစ်ဘဲ၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ဘဲ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်မပေးဘဲ၊ ဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရေး မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်အများစုက ရွှေဂုံတိုင်မူကို ယုံကြည်ထောက်ခံပါသည်ဟု ဆိုနေကြသော်လည်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေး မဝင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် အချိန်ကျနေပြီဟု ယူဆနေကြသည်။ ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပမှာပါ အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံနေသူ အားလုံးလိုလိုကလည်း ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မြန်ကျပြီး မဝင်ဖြစ်ပါက မည်သို့ဖြစ်လာမည်၊ မည်သို့လုပ်ရမည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ဝင်ဖြစ်ပါက မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မည်သည့်အဆင့်များတွင် မည်သို့ဝင်ကြမှာလဲဟူသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရတော့မည်ဟု ပြောဆိုသံများကို ကြားနေရပါပြီ။
မှန်လည်း မှန်ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုသည်မှာကလည်း အစအနပင်မမြင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံကို မည်သို့မှ မပြင်ဟု အထပ်ထပ် ဆိုနေသည့်အခါတွင်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် ပြုလျှင်သော်မှ ဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရေး အလွန်ခက်ပါလိမ့်မည်။
ယခုလို အချိန်မျိုးတွင် အဖွဲ့ချုပ် စီအီးစီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီစီအသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့သည် မည်သူတွေ မည်ရွေ့မည်မျှ ပါဝင်သည် ဆိုသည်ထက်၊ မည်သို့သော ဆုံးဖြတ်များကို ချမှတ်ပြီး၊ မည်သည့်အရာများကို မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်ရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟူသော တိကျသည့် ဦးတည်ချက်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသည်။
ပေါချောင်ကောင်းနဲ့ ခေတ်ကို အမီလိုက်ကြစို့ရဲ့
၂၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၀
နအဖ တပ်မတော် (လေ)
စကတည်းက တော်တော်ကြီးလွဲသွားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင်း ကိစ္စလေးတခုအကြောင်းပါ။ သူများကို မခံချင်လို့ ထသတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကအောက်ကပဲဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံပြီး နအဖတို့ နှစ်ထပ်ကွမ်း အရှက်ရသွားခဲ့ပုံတွေပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ပြဿနာမှာ ထိုင်းဘက်က အမေရိကန်လုပ် F 16 တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ မြန်မာ့နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခြိမ်းခြောက်တာကို နအဖတို့ ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ ခေတ်မီတပ်မတော်ကြီး တည်ဆောက်ရေးဆိုပြီး စစ်တပ်တွေထဲမှာ နအဖတို့ အရှက်ပြေလေသံတွေ ပစ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ F 16 လေယာဉ်တွေတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ထိုင်းတပ်တွေဘက်ကနေ GPS စနစ်ကိုသုံးပြီး ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ အမြောက်ဆန်တွေကြောင့် နအဖတို့တင်မက တာချီလိတ်မြို့ခံတွေတောင် ထိတ်လန့်သွား ပါသတဲ့။ ဒီကစလို့ ခေတ်မီတပ်မတော်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေပဲ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တောက်လျှောက် ရွတ်ဖတ်နေ ကြပါတော့တယ်။ စစ်လက်နက်ခေတ်မီရေးကိစ္စမှာ နအဖတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဆက်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ထပ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။
မူးတင်းပဲတင်း ငြင်းမနေနဲ့ အလကားရ မြန်မာ့လေတပ်မတော်
မြန်မာ့လေတပ်မတော်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၆) ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ထပ် (၁) နှစ်နီးပါး အင်္ဂလိပ်တို့ပဲ မြန်မာ့လေတပ်မတော်ကို ဆက်ပြီး ကွပ်ကဲ၊ ထောက်ပံ့၊ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ကျန် အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်လုပ် လေယာဉ်တွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံတချို့က ၀ယ်ယူထားတဲ့ လေယာဉ်အချို့ပဲ လေတပ်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ဂါးမောက် (tiger moths)၊ စပစ်ဖိုင်းယား (spit fires) နဲ့ အော်တာ (otter)၊ ဒါကိုတာ (dakota) စတဲ့ ကမ္ဘာစစ်သုံးလေယာဉ်ပေါင်း (၆၃) စီးနဲ့ ဗမာ့လေတပ်မတော်ကို စဖွင့်ခဲ့တာပါ။ စွမ်းရည်ကျနေတဲ့ လေယာဉ်တွေဖြစ်တာမို့လည်း ၁၉၄၉ ခုနှစ် တနှစ်ထဲမှာ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု (၂၄) ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်ရောက်တော့ မြန်မာလေတပ်မှာ အရာရှိ (၂၃၂) ဦး၊ အခြားအဆင့် (၅,၆၇၇) ဦးအထိ အင်အားတိုးလာခဲ့ပါတယ်။
မူလ မင်္ဂလာဒုံ (ပင်မတိုက်ခိုက်ရေး) လေတပ်စခန်းနဲ့ မိတ္ထီလာ (ထောက်ပို့) လေတပ်စခန်းတို့အပြင် နောက်ထပ် လေယာဉ်အုပ်၊ ရေဒါအုပ်တွေကို ဆက်တိုးချဲ့ခဲ့သလို အရာရှိ (၂၆) ဦးနဲ့ စစ်သည် (၇၅၀) ဦးပါ လေထီးတပ်လို့ခေါ်တဲ့ လေကြောင်းချီတပ် တခုကိုလည်း မဆလတို့ခေတ်မှာ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၈၄ နဲ့ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ကိစ္စအတွက် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကျ ရဟတ်ယာဉ် စုစုပေါင်း (၂၁) စီးကို အမေရိကန်ဆီက အလကားရပြီး တပ်မတော်လေရဲ့ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူ စစ်ဆင်ရေးကိစ္စတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တလျှောက်လုံး အလကားရတဲ့ စစ်လက်နက်တွေနဲ့ ခေတ်မီအောင် မြန်မာ့လေတပ်မတော်ကို မဆလအစိုးရတို့ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဗရုတ်သုတ်ခထဲ တရုတ်ပဲ ကယ်ပေလို့
၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတကာက ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေထဲမှာ စစ်လက်နက်ဝယ်ယူခွင့်တွေအပြင် လေယာဉ်နဲ့ ရဟတ်ယာဉ် အင်ဂျင်ပစ္စတင်တွေမှာသုံးတဲ့ အေဗီဂက် (avgas) တွေပါ ၀ယ်မရတာကြောင့် အရင်မဆလခေတ်က တစီးစ နှစ်စီးစ ဟန်ပြအဖြစ် ၀ယ်ထားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံလုပ် လေယာဉ်တွေ ပျံတက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘဲလ် (bells)၊ အော်တာ (otters)၊ ချက်မောက် အမျိုးစားလေယာဉ်တွေကို ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်မောင်းသမားတွေဆီကို လျှော့ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၇၅ ကနေ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ယူဂိုစလပ်လုပ် လေယာဉ် (၅၇) စီးဟာ ဆက်အလုပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေကို ဆိုက်သွားပါတယ်။ မပျံနိုင်တဲ့ အနောက်အုပ်စု လေယာဉ်တွေနေရာမှာ တရုတ်၊ ရုရှနိုင်ငံလုပ် လေယာဉ်တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့ နအဖတို့ထပ်ပြီး စဉ်းစားလာရပါတော့တယ်။
အာရှဒေသတွင်း ဒုတိယစစ်အင်အားအကြီးဆုံး တပ်မတော်တခုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရာမှာ ကြည်းတပ်၊ ရေတပ်တို့လို ခေတ်မီလေတပ်ကြီးဖြစ်လာအောင် နောက်ဆုံးပေါ်လေယာဉ်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ အရင် မဆလခေတ်တုန်းက လေတပ်မှာ လေယာဉ်နဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ပေါင်း (၁၃၁) စီး ရှိရာကနေ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း နောက်ထပ် အစီး (၁၀၀) တိုးပြီး စုစုပေါင်း အစီး (၂၃၁) ရှိလာပါပြီ။ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံက လေယာဉ်ပေါင်း (၃၁၅) စီး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက (၂၀၀) စီးစီ အသီးသီးရှိကြပေမယ့် အဆင့်မြင့်လေယာဉ်တွေ အများစုဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့် စစ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးမှာ ‘တရားအားထုတ် တရုတ်အားထား’ ဆိုသလို နအဖအစိုးရအဖို့ တရုတ်ကလွဲရင် ဘယ်ကမှ အားကိုးရာ မရခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂) ဘီလီယံဖိုး တရုတ်လုပ် လေယာဉ်တွေ နအဖတို့ ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် တရုတ်ဘက်က မှာယူတဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ ရုရှလုပ် MiG 21 လေယာဉ်ကိုတုပြီး တည်ထွင်ထားတဲ့ တရုတ်လုပ် J အမျိုးစား တိုက်လေယာဉ် (၁၂) စီးကို ၀ယ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ နိုင်ငံစုံကနေ ၀ယ်ထားတဲ့ စုစုပေါင်းလေယာဉ် (၂၃၁) စီးအနက် ထက်ဝက်နီးပါးပမာဏရှိတဲ့ တရုတ်လေယာဉ် (၁၂၀) စီး ယနေ့မြန်မာ့လေတပ်မှာ ရှိနေပါပြီ။
ချင်ဒူး (Chengdu) F7(၆၀) စီး
ရှင်ယန်း (Shenyang) J (၆) စီး
နန်ချန် (Nanchang) Q5(၃၆) စီး
ရှန်စီ (Shaanxi) Y 8 D2(၆) စီး
ဟုန်ဒူး (Hongdu) K 8 (၁၂) စီး
… ပေါင်း (၁၂၀) စီး ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ၀ယ်ယူခဲ့သမျှ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအားလုံးရဲ့ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ တရုတ်ဆီကပါပဲ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် နအဖ တက်လာကတည်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၂) ဘီလီယံဖိုး လက်နက်တွေကို တရုတ်က ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း အလတ်စားနဲ့ အပေါ့စားတင့်ကား အစီး (၂၀၀)၊ သံချပ်ကာယာဉ် (၂၅၀)၊ ဒုံးပစ်စနစ်များနဲ့ အမြောက်ကြီး၊ လေယာဉ်ပစ် အမြောက်တွေ၊ မြေပြင်ဝေဟင်ပစ်ဒုံးတွေ၊ ကင်းလှည့်ရေယာဉ်တွေ၊ ဒုံးကျည်တပ် အမြန်တိုက်ရေယာဉ်တွေ၊ ကင်းလှည့်တိုက်ရေယာဉ် … စတာတွေအပြင် တရုတ်ဘက်က သင်တန်းဆရာတွေပါ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအသုတ် ဒေါ်လာသန်း (၄၀၀) ဖိုးရှိ လက်နက်တွေကို ရောင်းချပေးရာမှာ ရေတပ်ကင်းလှည့််သင်္ဘောတွေ၊ အမြောက်တင်သင်္ဘောနဲ့ ရဟတ်ယာဉ်များစွာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်အား (၄) သိန်းကနေ (၅) သိန်းရှိတဲ့ ဒီကနေ့အခြေအနေထိ အင်အားတောင့်တင်းလာအောင် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အဓိက ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တာ တရုတ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်နေရာအနှံ့မှာ လူသုံးတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သာမက မြန်မာစစ်တပ်ထဲ ရှိရှိသမျှ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတိုင်းဟာ တရုတ်ဖြစ်တွေ အများစုပါ။ ၀ယ်ယူပြီး တရက်အတွင်းမှာ ကံမကောင်းရင် အစုတ်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ တရုတ်စက်တွေရဲ့ သဘောအတိုင်း နအဖတပ်ထဲက စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအားလုံး ဘာတခုမှ ရေရှည်အာမခံချက်မရှိကြပါဘူး။ အခုရောင်းထားတဲ့ တရုတ်လုပ်လေယာဉ်တွေအားလုံး ရုရှလေယာဉ်ဒီဇိုင်းကို တုပထားပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်ထုတ် မော်ဒယ်တွေသာ အများစုပါ။
ဒါကြောင့် ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့က ပျက်ကျခဲ့တဲ့ တရုတ်လုပ် နန်ချန် Q5တစီးဟာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ၀ယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီဝယ်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်အားလုံးကို (၅) နှစ်သက်တမ်း အာမခံချက်ပဲ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေက ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်လုပ်လေယာဉ်တွေ စီးဖို့ကို လေသူရဲတိုင်း ထိတ်လန့်နေကြတဲ့အဖြစ် ရောက်နေရပါပြီ။ လေတပ်ထဲက သက်သာဆိုင်တွေမှာ စစ်ဆင်ရေးရှိရင် ဖယောင်းတိုင်တွေ သိပ်ပြီးရောင်းကောင်းကြပါတယ်။ လေယာဉ်ပျက်မကျအောင် လေယာဉ်မှူးတွေ ဆုတောင်းဖို့ပါတဲ့။
တပ်မတော်တရပ်ကို အခြေခံကစပြီး ခေတ်မီအောင် မတည်ဆောက်ဘဲ ပေါချောင်ကောင်း ဟန်ရေးပြကောင်းလောက်ရုံ အဆင့်သာရှိတဲ့ တပတ်ရစ် စစ်လက်နက်တွေကို ၀ယ်ယူတပ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် အလွဲလွဲအမှားမှားတွေဖြစ်ပြီး နအဖတို့ ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ပုံကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် ထိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်ရပ်တွေက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အရေးပြီးတဲ့နောက် အရေးပေါ်အဖြစ် ရုရှလုပ် MIG 29 လေယာဉ် (၁၂) စီးနဲ့အတူ အမေရိကန် F 16 တိုက်လေယာဉ်ကို တုပထားတဲ့ တရုတ်လုပ်လေယာဉ်တွေကို နအဖတို့ ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း မြန်မာ့တပ်မတော် (လေ) က တရုတ်ပြည်လုပ် J အမျိုးစား ရှင်ယန်း တိုက်လေယာဉ်တစင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၃) ရက်နေ့မှာ မှော်ဘီလေတပ်စခန်းကနေ ပျံသန်းလေ့ကျင့်စဉ် ကြံခင်းမြို့အနီး ပျက်ကျသွားပြန်ပါတယ်။ ၀ နယ်စပ်မှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် အသင့်ရှိနေအောင် အမှတ်စဉ် (၁၃) ဦးမြောက် လေချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြတ်ဟိန်း အမိန့်အရ အခုလို ပျံသန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ပေါင်း (၉) ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ တနှစ်ကို တစင်းလောက် ပျက်ကျနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ လေယာဉ်တွေက အဆင့်နိမ့်သလို လေသူရဲတွေခမျာလည်း ကျွမ်းကျင်မှု နည်းကြပါတယ်။ လိုအပ်သလို အမြဲတမ်း လေ့ကျင့်ပျံသန်းနိုင်ခွင့်လည်း လေယာဉ်မှူးတွေ မရကြပါဘူး။
သင်တန်းဆင်း ရဟတ်ယာဉ်မှူးကောင်းတယောက်အဆင့်ရောက်အောင် ပျံသန်းလေ့ကျင့်ချိန် နာရီ (၅၀) လောက်သာ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ ကျန်အချိန်တွေမှာလည်း နေပြည်တော်က အမိန့်ပေးလာမှ လေယာဉ်ပေါ်တက် လေ့ကျင့်ပျံသန်းခွင့် ရှိကြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ပျံသန်းစဉ် စစ်လက်နက်၊ ဗုံးသီး၊ မြေပြင်ဝေဟင်ပစ်ဒုံးတွေကို တပ်ဆင်မောင်းနှင်ခွင့် လုံးဝမရှိ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ တဘက်ကလည်း လေယာဉ်တခါပျံတက်ရင် တနာရီမှာ လေယာဉ်ဆီ PC7အတွက် (၃၄) ဂါလန်၊ Mi2 ရဟတ်ယာဉ်အတွက်ဆို (၆၈) ဂါလန်၊ A5လေယာဉ်များအတွက် (၆၂) ဂါလန်လောက်စီ ကုန်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဆီ အလွန်ကုန်ကျတာကြောင့်မို့လည်း လေယာဉ်တွေကို အမြဲတမ်း ပျံတက်လေ့ကျင့်ပေးမနေနိုင်ပါဘူး။ မြေပြင်မှာ စက်နှိုးစမ်းသပ်ရုံလေးနဲ့ကို တစီးကို လေယာဉ်ဆီ နေ့စဉ် (၁၀) ဂါလန်ကျော် ကုန်ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့်် မြေပေါ်မှာပဲ (၁၀) မိနစ်လောက် စက်ကိုပူအောင် စက်နှိုးပြီး မြေပြင်စမ်းသပ်ပျံသန်းခြင်းတွေကိုသာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း လုပ်နေကြရပါတယ်။
မပျံဘဲ အပျံစာရင်းပြပြီး လေယာဉ်ဆီထုတ်ရောင်းစားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေကလည်း လေတပ်စခန်းတိုင်းမှာ တပုံကြီးပါ။ ပစ္စည်းတွေက ခေတ်မမီ၊ စစ်သည်တွေက စားဝတ်နေရေးမပြေလည်တော့ ဆီခိုးရောင်းစား အကျင့်ပျက်ကြ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း လေ့ကျင့်ဖို့ နေနေသာသာ လေယာဉ်ဆီဖိုးနဲ့ လေ့ကျင့်ပျံသန်းစရိတ်ကိုတောင် တပ်မတော်လေမှာ လုံလောက်အောင် ချထားမပေးပါဘူး။ မြန်မာ့ဝေဟင်ကို စိုးမိုးမယ့် တပ်မတော်လေ လေယာဉ်တွေ မြေပေါ်မှာ နေ့တိုင်း အပျံကျင့်ပေးနေရတယ်လို့ လေတပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအုပ်က စစ်သည်တွေကိုယ်တိုင် ပြောစမှတ်တွင်နေလေတော့ မခက်ပါလား၊၊
လွဲတာကတော့ အတော့်ကို လွဲနေကြတာပါ။ လေယာဉ်ကို စက်နှိုးပြီး နွားလှည်းလို မြေပြင်မှာ ပျံခိုင်းနေတဲ့ တပ်မတော်ကို ဒါမှ မြန်မာ့ခေတ်မီတပ်မတော် စစ်စစ်ပါလို့ ပြန်ပြင်ပြီး ခေါ်ရတော့မလိုပါပဲ။ စစ်ဆင်ရေးရှိလို့ ပျံကြရပြီဆိုရင်လည်း ဘုရားတပြီး လေယာဉ်တွေ မောင်းနေကြရတဲ့အဖြစ်မျိုး။ တနှစ်တယောက် ကံဆိုးသူမောင်ရှင်စာရင်းထဲ ပါသွားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ တပ်မတော်လေက အရာရှိတွေ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ။
AAPP Political Prisoner Review
Summary of current situation and analysis
As of 31 December there wereatotal of 2,177 political prisoners in Burma. This is an overall
increase of 15 in comparison to last year’s figure of 2,162. In 2009, 264
political prisoners were arrested and 266 were released. AAPP also
received information about activists who were arrested and released before
2009, and this retroactive information explains why there is actually an overall
increase of 15during the course of
Members of the Human Rights Defenders and Promoters network
Since the protests in August 2007 leading
to September’s Saffron Revolution,atotal of 1,167 activists have been arrested and are still in detention.
In 2009, 264 political prisoners were arrested,129activists were sentenced, 266were released, and 71 prisoners were transferred. At least 48 political prisoners reported new health symptoms in 2009,
bringing the total number of political prisoners in poor health to129as
of 31 December 2009. This is due to harsh prison conditions, transfers to
remote prisons where there are no doctors, and denial of proper medical care.
Political prisoners in Burma continued to suffer in
2009. Despite positive signs such as the
international community’s sustained condemnation of the military junta’s human rights
abuses, and visits to Burma by numerous key international dignitaries and diplomats, over 2,100 political
prisoners remain imprisoned across Burma.
As detailed in AAPP’s May 2009 report, Burma’s
Prisons and Labour Camps: Silent Killing Fields, inadequate medical
care, systematic torture, long-term imprisonment, transfers to remote prisons,
and denial of healthcare have led toagrowing health crisis for political
prisoners in Burma. As
of 31 December 2009, there were 129 political prisoners in poor health, and
during the course of the year at least 71 political prisoners were subjected to
With national elections expected to take place in 2010
despite the ongoing detention of prominent political leaders such as NLD leader
Daw Aung San Suu Kyi, AAPP views the release of all political prisoners in Burma asanecessary step towards national reconciliation,
and the creation ofafree and democratic Burma.
contact: Tate Naing +66(0) 812 878 751
Bo Kyi +66(0) 813 248 935
ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၂၉ ဦးရှိ
မြင့်မောင် | သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာအကျဉ်းထောင်များတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၂၉ ဦး ရှိနေပြီး၊ လုံလောက်စွာ စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) AAPP-B နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
“လုံလောက်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု မရကြဘူး။ တချို့ထောင်တွေမှာ ထောင်ဆရာဝန် မရှိဘူး။ ခန္တီးထောင်မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသား အတော်များများ ငှက်ဖျားရောဂါ ခံစားနေရတယ်။ အကျဉ်းသား တော်တော်များများ ငှက်ဖျားရောဂါ ရှိတယ်။ ရောဂါရှိတဲ့သူတွေ အချိန်မီ ဆေးဝါးကုသမှုမရဘဲ နောက်ကျတဲ့အတွက် ရောဂါဝေဒနာကို မခံစားသင့်ဘဲ ခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ အကြောဆိုင်းလာတွေ ရှိသလို၊ မျက်စိ မကောင်းတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ များလာတယ်'' ဟု AAPP-B တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား၏ မိသားစုဝင်တဦးက “ကျန်မာရေး စောင့်ရှောက်မှုကတော့ သူတို့အနေနဲ့ ခရီးသွားဟန်လွဲ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကမ္ဘာက ပြောမှာစိုးလို့ လုပ်နေတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီလောက်ထိ ဖိဖိစီးစီး လုပ်ပေးတာမျိုး မရှိပါဘူး။ စောင့်ရှောက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆေးရုံတင်ဖို့ ခွဲစိတ်ရမယ့် လူနာဆိုရင်လည်း ခွဲစိတ်ရမယ့် အခြေအနေထက် တအားဆိုးဝါးနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးကျမှ ဆေးရုံတင်ပေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်စီဖြင့် နိုင်ငံ့ အစွန်အဖျား ဒေသများတွင် အကျဉ်းကျနေသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုမင်းကိုနိုင် (ပူတာအိုထောင်၊ ကချင်ပြည်နယ်) သည် သွေးတိုး၊ နှလုံးရောင်နှင့် အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲသည့် ရောဂါ ခံစားနေရပြီး၊ ကိုကိုကြီး (မိုင်းဆတ်ထောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်) မှာ အသည်းရောင် အသားဝါ B ပိုးနှင့်အတူ အကျိတ်အဖုများ ထွက်နေကာ ရာသီဥတုအေးသဖြင့် ဝေဒနာများ ခံစားနေရကြောင်း AAPP-B ထံမှ သိရှိရသည်။
ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ဖြင့်ပင် ပူတာအိုထောင်တွင် ကျခံနေရသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုအောင်သူသည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နေသဖြင့် မကြာသေးခင်က ECG (နှလုံးခုန်နှုန်းကို စမ်းသပ်သည့် ကိရိယာ) စစ်ဆေးကြည့်ရာ အစက်အပြောက် ၃ ခု တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုမျိုးမင်းမှာလည်း ထိပ်ကပ်နာ ရောဂါ ခံစားနေရသည်။
အလားတူ ၂ဝဝ၇ ခု နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ရှိ မြရိပ်ညိုဟိုတယ်ရှေ့၌ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ပိုစတာ ချိတ်ဆွဲမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ဖြင့် ပူတာအိုထောင်တွင် ပြစ်ဒဏ်ကျနေရသည့် ကိုဘိုဘိုဝင်းလှိုင်သည် ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သော်လည်း လိုအပ်ပါက ဆေးရုံတင်ရမည် ဆိုလျှင် ထောင်အာဏာပိုင်များထံ ရက်သတ္တတပတ်ခန့် အချိန်ယူတင်ပြရကြောင်း ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခဲ့သည့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မီမီလှိုင်က ပြောသည်။
သူက “ဘိုဘိုဝင်းလှိုင်ကိုလည်း ၃ ရက်နဲ့ ဆေးရုံက ဆင်းခိုင်းတာတွေ ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလူနာက သွေးလွန်သွားရင် ဆေးရုံကို ချက်ချင်း လာပို့နိုင်မလားလို့ မေးတော့ တပတ်လောက်မှ၊ အထက်ကို စာတင်ပြီးမှ အချိန်ယူရမယ်လို့ ပြောတော့ ဆရာဝန်က သက်သာတဲ့ အချိန်မှ ဆင်းပေးလိုက်တယ်။ တခါလုပ်ပေးဖို့ဆိုရင် ၇ ရက်၊ ၈ ရက် အချိန်ယူပြီးတော့မှ အထက်ကို စာတင်ရတာတွေ ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကိုဘိုဘိုလှိုင်ဝင်း လတ်တလော ခံစားနေရသည့် ငှက်ဖျားနှင့် နှလုံးရောဂါအတွက် ဆေးဝါးလိုအပ်နေသဖြင့် မိခင်က ဆေးဝယ်ပေးခဲ့ရသည်။
ပူတာအိုထောင်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၅ ဦးခန့်ရှိရာ ၎င်းတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်က တလလျှင် တကြိမ်မျှသာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို လာရောက် စစ်ဆေးပေးကြောင်း ထောင်ဝင်စာ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မိသားစုဝင်များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မန္တလေးမြို့ အုတ်ဖိုထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၀၄ နှစ် ကျခံခဲ့ရသည့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ - ဗကသ (အထက်ဗမာပြည်) ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဗိုလ်မင်းယုကို၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာလည်း ဆိုးရွားနေကာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မသက်သက်အောင်၏ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်နေကြောင်း AAPP-B က ပြောဆိုသည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမှာမူ ၂၁၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း AAPP-B စာရင်းများက ဆိုထားသည်။